Arakan National Library
Posted by Arakan National Library at 3:06 AM ,0comments
Power and Purpose H. Ernest Hunt
Handbook (Seminar on Democracy, Constitution and National Reconciliation Organized by Danish Burma Committee
Burma Women's Voice for Hope Edited by the Thanakha Team
The Guide to Underground of The African National Congress
English Vocabulary in Use - Elementary Michael McCarthy Felicity O'Dell
Mastering American English Grant Taylor
Essential Grammer in Use - Elementary (with Answers) Raymond Murphy
Language in Use - Self-Study Workbook with Answer Key (upper intermediate)
Headway Teacher's Book (pre-intermediate) John & Liz Soars
A Trainers Manual ( Training onf Fact-Finding and Documentation of Human Rights Violations) D.J. Ravindran
With Migrating Hope (Burmese Women Working in The Sex Industry - Thailand) Images ASIA
Our Land and Natural Resoures In Burma NYF
At What Price? Gold Mining in Kachin State, Burma - Nov 2004 A report by Images Asia & Pan Kachin Development Society
Earth Rights (Linking Human Rights and Ecological Protection ) March -1999
Asian Human Rights Defender Vol 1, No. 12005
Burmese Refugees in Bangladesh: Still No Durable Solution Human Rights Watch
Charting The Exodus From Shan State (Patterns of Shan Refugee Flow into northern Chiang Mai Province of Thailand 1997-2002) THE SHAN HUMAN RIGHTS FOUNDATION, 2003
Tibetan Bullentin (The Official Journal of the Tibetan Administration ) Sep-Oct 1997
The Crisis in Burma: An Agenda for the United Nations Security Council - Oct 2003 The Burma Fund
Meanings into Words - Intermediate Workbook Cambridge University
Language in Use - ( intermediate)
Headway Teacher's Book (pre-intermediate) - Includes Test Booklet
Headway Student's Book (upper-intermediate)
Headway Student's Book (Pre-Intermediate)
Discoveries (Students' Books 3) Longman
A Town Like Alice Retold by D.H. Hill
New First Certificate (Workbook) Oxford University Press
English Grammar in use third edition Raymond Murphy
Englis Vocabulary in use upper intermediate, advance Michael McCarthy Felicity O'Dell
Idioms organiser, Organised by metaphor, topic and key word q JON and KEY WORD JON WRIGHT
How Maxism Works Chris Harman
Explosives and Demolitions Headquarters Department of Army Washington,DC, 15 June 1992
The Beginner Electricians Guide to Knight Replicas From, Knight Technology
MIT Guide to Lock Picking , Ted the Tool, September, 1, 1991
Part 1, Offensive Operations
Scouting and Patrolling U.S Marine Corps 17 April 2000
Seabee Combat Handbook Volume 1, Part 1, April 1993 Nonresident Training Course
FM 7-10, The Infantry Rifle Company , Part 2
Seabee combat handbook Volume 1, Part 2, April 1993
English Vocabulary in Use, Advanced Michael McCarthy Felicity O'Dell
Organization of the united State Army, Department of the Army Pamphlet 10-1
FM 7-10, The Infantry Rifle Company , Part 1
Civil Disobedience Guide, and the War Resisters league form the Nonviolent Ways Project
UK University of Kentucky Student Activities, Leadership and Involvement
The Map of Nay Pyitaw, Myanmar, Published by Naypyitaw Development Committee
The A Files, AN Illustrated Handbook on the Art and Science of Things that Go Boom
The Terrorist's Handbook, by Written. Unknow Author
CIA, Psychological Operations in Guerrilla Warfare
Guerrilla Warfare Tactics in Urban Environments, Master of Military Art and Science General Studies Fort leavenworth , Kansas 2003
From Dictatorship to Democracy, A Conceptual Framework For Liberatin Gene Sharp
There Are Realistic Alternatices, Gene Sharp, The Albert Einstein Institution
Barron's SAT 1, Build Your Vocabulary
The Heinemann English Wordbuilder, Vocabulary development and practice for higher-level students, guy Wellman
Reasons for reading Students' book evelyn Davies and Norman Whitney
Diplomacy Training Program. Human Rights Defenders manual , The University of New South Wales Sydney 2052 Australia
The Dark Age of Arakan Under the Alines' Rule From 1785 to Up To Date
Mrauk-U Township Human Development Initiative Baseline Survey Settlement and land Records Department Ministry of Agriculture and Irrigation government of the Union of Myanmar Yangon, Myanmar
Kyauktaw Township ,Human Development Initiative Baseline Survey Settlement and land Records Department Ministry of Agriculture and Irrigation government of the Union of Myanmar Yangon, Myanmar
Paletwa Township, Human Development Inuitiative Baseline Survey Settlement and land Records Department Ministry of Agriculture and Irrigation government of the Union of Myanmar Yangon, Myanmar
The Union of Burma and Ethnic Rohingyas
Module VI, Digital Editing . AMARC- Europe World Association of Community Radios 15 Paternoster Row Sheffield SI 2bX
Radio On The Frontline , Skills, Technipues and challenges for radio journalists Fiona Lioyd
Towards Democracy in Burma Institute for Asian Democracy
Abrief history of Arankan nationalities
Campaign Dictionary of Military Terms Macmillan
The Deep South States of American
Human rights Education Institution of Burma (HREIB) Transitonal Justice Program
Reproductive Rights Traning of Trainers July 2007
Gender, Conflict and Journalism A Handbook for South Asia
Burma Issues , January 2001 , Volume 11 Number1
Forrm for Democracy in Burma
To Forcibly Repatriate or Not; Thailand's Dilemma Burma issues special report
The Master of Ballantrae R.L . Stevenson
burma Twleve Years after 1988/A Common Future By Camilla Buzzi
Facta About NRP
RDF Approach to Free Rakhaing Other Backward People From Poverty Trap
Aftershocks Along Burma's Mekong The Lahu National Development Organisation August 2003
What is going on in Burma's coastal region? A News Report
Indigenous Knowledge and Biodiversity In Asia Asia Indengenous Peoples Pact Foundation
Global Day of Prayre For Burma March 12, 2006
Union, Solidarity Peace Democracy
Legal Jurnal on Burma No.24, (August 2006
Pridi, Banomyong The Centennial Anniversary 11 May 2000
Taking Shelter Under Trees, Refugeee Porotection and Sustainable Forest Management
Organizational Behavior, Hellriegel .Slocum. Woodman Fifth Editon
Report On Human Rights Intensive Trainign For Trainers Chiang Mai, 7th 31th May 2003
A land Where Buddhist Monks Are Disrobed and Detained in Dugeons Assistance Association for political Prisoners November 2004
The Burma Fund Intitatives 2000
A Report On Forced Labor In Burma Earthrights International
Total Denial Continues A Report by Earthrights International
Burma Debate. Vol II ,No.4August / Septemver 1995
Campus Bound Passport to Academic success Jane Jackson Maureen Sargent Jean Hunt
Burma Rights Years book 2000 , Burma
The Darkness We See Assistance Association for Political Prisoners in burma
Spring 1992 Media Studies Journal , Media Wars The Freedom Forum Media Studies Centre
A Constitution for Living Phraphomkhunaphon
Gems of Buddhish Wisdom
Environment Words, A Dictionary in Planin English
English for Dictionary For Advenced Learners Collins Cobuild Major New Edition
Dammed by Burma's Generals The Karenni Development Research Group
Forum Journal Vol 1, No, 4, Jun, 2007
Towards More Effective Protection of Human Rights Defenders I asia
WLB Any Progress For the Lives of Women in Burma Since Beijing?
Forum Journal Vo1, No,1 August. 2006
Understanding Peacebuilding In the Context of Burma Run Pen Sakhong
King Solomon's Mines H. Rider Haggard Penguin Readers
The White Shirts, How the USDA will became the new Face fo burma's dictatorship
Federal Union and Enthnic Nationalities
Overcoming Shadows Women as Peacebuilders' Team
Burma Tentative Steps Bumper Issue
The MonaPeople WithoutaCountry MUL
Rights of Migrant worker , Uniter natios Convention on The Protection of the rights of all migrant Workers and member of their Famililes
Ven. Khaymar Sarra All Burma Young Monks' Union Hitting Velow The Belt Principle Tactics of SLORC
Transitonal Justice Basics Human Rights Education Institute of Burma
Daming at Gunpoint. Karen Rivers Watch November 2004
Burma Special Report, September 1999 CRPP
Statements' letter and CRPP Notifications 1999 National League For Democracy
School For Rape, The Burmese Military and Sexual Viokence An Earthrights International report
Burma's Women and Children; The Suffering and Survival Human Rights Foundation of Monland March 2002
Cycle of Suffering Human Rights Documentation Unit and dVurmese Women's Union
Earth Rights , Linking Human Rights and Ecological Protection
Real Freedom For Democracy and Justice j;j Rousseau
Death in Custody Burma Information Guroup
Introducing ,Chega/ The Report of the Commission for Reception, Truth and Reconciliation in Timor leste CAVR
Revise Your English , An Effective Workbook
Save Lives, Save Limbs Htun Htun Oo
Licence To Rape , the Burmese Military Regime's use of sexual violence in the ongoing war in Shan State
Why are Burma's Freedom Fighters Imprisoned in India? Foreword by Dr. Col Lakshmi Sahgal
AIPP Foundation. ANNUAL Report 2003
Technical Advisory Network of Burma,Working papers Toe Zaw Latt, WP No. 9/ March 2005
Writing and Reading For Critical Thiking Charles Temple, Jeannie l. Steele and Kuris S. Meredith
Burma Bebate Vol. IV. NO. 1 January/ February 1997
Documents of Education Programmees in the ethnic nationality areas and Education for futrre Burma August 2002
ENSCC Ethnic Nationalities Solidarity and Cooperation Committee The New Panglong Initiative Re- Building The Union of Burma
Show Business Rangoon's War On Drugs" In Shan State Shan Herald Agency For News December 2003
Human under Attack; Human rights abuses in Arakan state A report by the Arakan state Human Rights Commission
System of Impunity, Nationwide Patterns of Sexual Violence By the Regime's Armed Foreds and Authorities in Burma
Abuses against peasant farmers in burma, Emphasis on Mon State, Karen State and Tenasserim Division
Humanitarian Assistance to Burma
Burma. A Land Where Buddhist Monks Are Disrobed and Detained in Dungeons Assistance Association for political Prisoners Burma
Workbook Three, Using Prepositions and Particles J. B. Heaton
Total Denial A report an the Yadaa Pipeline Project in Burma Earthrights International
Religious Persecution, A campaign of Ethnocide Against Chin Christians in Burma
World-Wide Distance Chart , Japan Navigating Officers; Association
Parliaments of the World , Second Edition , Volume 1
Grapevine, Video Achivity Book 1 peter Viney and Karen Viney
Wholesale Destruction, Karen Human Rights Group April 19998
India, Northeast India's Hidden Displacement, January 2000
Arm, Automatic Response Mechanism, Women Exchange Map Foundation
Peace and Reconciliation For the Children of War World Vision
A Dictionary of Asia and the Pacific Organizations , 3rd Edition
Life in the Country, Specical Emphasis on far Southern and south eastern regions Tenasserim Division and Mon State
The First Certificate , Masterclass Student's Book, Simon Haines Barbara Stewart
The Best English No, 28, 0CTBER U Khine Mg Chay
Listening to the People's Voices Pan Kachin Development Society Karen Environmental and Social Action Network
Desert Flowers NYF
Forgotten Kingdom of Arakan Workshop: From Dhanyawai to 1962 (A Public Seminar on History , Identity, Culture, and the challenges they face) 23-24 Nov 2005 First Hotel, Bangkok, Thailand
Unconventional Warfare and The Principle of War
Mao's Basic Tactics (Published in 1937)
Principles of War Carl von Clausewitz
Minimanual of the Urban Guerrilla Carlos Marighella
Introduction of Political Science Eugene Jones
North Korean Tactics James M. Minnich (Major. U.S. Army)
Political Science (Make up final Exam-Q 1, 2004-5) Part 1
Che Guevara Gurerrilla Warfare
Strategic Recommendation for The KNLA
Handbook of Radio Operator
Human Rights Education Training For Traniner, 26/ 4/ 2004 to 20/ 5/ 2004 HREB
Divine Secrets of the Ya Ya Sisterhood Rebecca Wells , Advance
Peace Building and Conflict Transformation Worksho Oct 2nd/ 7th/ 2005
Women's Report Card on Burma 2001 A l TSEAN Burma
A Tale Of Two Towns Moutri Umavijani
Report On Human Rights Intensive Trainign For Trainers Chiang Mai, 7th 31th May 2003 HREIB
The 60th birthday ofanational heroine NLD. LA Korea, Branch
JOURNWYS , A Reading and Literature Program Banner
TORTURED VOICES, Personal Accounts of Burmas's Interrogation Centres An ABSDF Publication
Magazine -2002 Issue SYCB
Managing Democratic Transition in Burma ;Learning Lessons from Abroad
Shan Women's Action Network ( SWAN)
Lawka Pala , No. 26 April 2007 Legal Journal on Burma
Legal Issues on Burma , No, 11. April 2002
Legal Issues on Burma , No, 10, December 2001
Indgenous Peoples Human Right Report in Asia Cambodia , Thailand , and Nepal
ECDF , Dreft
INTRDUCTION TO POLITCAL THEOTY R. C. VERMARI
An ancient Capital of Rakhine U Shwe Zan
Compilation of documents relating to the 3rd SARP Forum June 13-16, 2005
Karen National Union (KNU) Bulletin
Can Planet Earth Be Saved? Awake , Jaunary 8, 2005
From Beojing With Love July 2004,Vol .12,No.7
Burmadoc Database Thesaurus
Puvlic Administration in India Theory And Practice
Freedom of the press in India edited by A.G Noorari
Toward More Effcetive Protection of Human Rights Defenders in Asia December and November 2001
Child Lobour Clubs For Working Children 1982 to 1998
What is Patriarchy? Kamla Bhasir
ArakanPost Monthy Journal issue 13/ March/ 2006
O level English Answers to Section 111 New Edition 2oo1
Arakan Post Monthy Journal Issue 16,. August 2006
Arakan Post Monthy Journal Issue 13, March 2006
The Swedish Social Democratic Party Progranmme Socialdemokraterm
Burma Lawyers' Council 1999 Annual Report
Unsettleing Moves,. The Lahu National Development Organisation Apr-02
National Human Rights Commission Annual Report 2002 National Human Rights Commission the Repblic of Korea
Transitionall Justice Program Training / Workshop Report April 3-8, 2003
National Light, A Jouranl for Burmese Social Forces
Women's Report Card on Burma 2001 Al Tsean Burma
Child Worker in Asia , The Worst Forms of Child labour Vol. 15. No.2May / August 1999
Child Workers In Asia Vol. 17. No. 23 May -Dec 2001
Amnesty International Human Rights Plain Langguaje
Strengthenign Democracy Through Political Parties A presentation From the Olof palme international Centre
Fidel Castro On Imperialist Globalization, Two Speeches
The Choice , Global Domination of Global leadership Zbigniew Brzezinski , Author of the Grand Chessboard
Word Power, Essential tools for buildingasolid Vocabulary Kaplan
A Brief History of the National Democratic Movement fo Enthnic Nationalities
Buddhist Art and Architecture With the special Reference to myanmar Than Tun
Creating Asia Flags of Human Rights, Seeds of Freedom Human Rights Report 1999
Shan Refugees Dispelling the Myths, The Shan Women's Action Metwork September 2003
Development dialogue , The Southesast Asian Media inaTime of Crisis
What is Great Eassay by Keith S. Folse , A Muchere / Vek
Sharimp Farming , Mavgrove Forest and Livehood of local people in Arakan State by Khaing Win Shwe
Our Land and National Resources in Burma , Ethnic Youth Perspectives
Humanitrian Assistance to Burma, Research Paper of the Burma Un Severce Office New York, March 2003
Enviromental management in oil and gas exploration and production, An overview of issuse and management approaches
Oil and Gas Development In Burma
International energy out look 2004
Oxford Progressive english reader2by lord Jim Joseph Conrad
The Scarlet letter for primary by Nathaniel Hawthorne
Lifeline, Biology, Freedom, Determinism, Essential Reading for anynoe Interested biology by Steven Rose
Bristol Murder, Philip prowse , Level III , vocabulary Range 1500 words
Enviroment Words A Dictionary in plain English
The Asia Development Bank and Dams by Arturo Nuera Nov-05
Legal Issues On Burma Journal No. 16. December 2003
Legal Issues On Burma Journal No. 15( August 2003)
Legal Issues On Burma Journal No. 13 ( December 2002)
Legal Issues On Burma Journal No. 12 August 2002
Legal Issues On Burma Journal No. 17 April 2004
HREIB's 5th Year Anniversary , July 17 , 2005
Journal of Democracy Exploration, November 2, June 2006
The Darkness We See, Torture in Burma's Interrogation Centres and Prisons Assistance Association for Political Prisoners Burma
Future Constitution of Federal Union of Burma, National Concil of Union of Burma
Understing Peacebuilding in the context of Burma by Run Pen Sakhong
Burma Women's Voices of Freedom , Edited by the thanakha Team
Asian Shipper, Season's Greeting , Dec 25, 95, Best Connections
Federal Union and Enthnic Nationalities by Nation Concil of Union of Burma
Commentary Furture Constitution of Federal Union of Burma, Nation Concil of Union of Burma
Basic Computer Science by Zaw Zaw
Under The Boot , The Burmese Army clears the way of Chiness Dams on the Shweli River
Burma Debate , Vol VI, Vo. ! Spring 19999
KYO , News Letter July 2004 No, 4
Nation Reconciliation Program
Fair Trial , Teaching Note, Prepared by U Aung Htoo, General Secretary Burma Lawyers' Council
Women Polotiocal Prisoners in Burman Joint Report
Burma women's Voices for Freedom
Burma Women's Voices For Change
Burman Women's Voices For Hope
Orchestra Buman Group
Pakistan Under Musharaf A Left View
Human Rights Education Institute of Burma July 17, 2005
Burma Briefing Issues and Concerns Volume 1
This is the Sustainavble Development
Grupyin Shanan Magzine , Vol -1, April 2006 Jintghpaw Wunpawng Amyu Sharawt Hpung
Friends Without Borders Mangazin
The Second Preliminary Report of The Ad hoc Commisson on Depayin Massacre (Burma )
Resource material collection on human rights education
Welcome Home To Nothing ; Refugees Repatriate toaForgotten Somaliland
Total Denal Continues ;Earth Rights Abuses Along Yadana And Yetagun Pipelines in Burma
The Current State of Women / Conflict Area Specific, A Shadow Report to the 22nd Session of CEDAW by Women Organization From Burma
Legal Issues On Burma Journal No.7December 2000
Legal Issues On Burma Journal No.6 September 2000
Legal Issues On Burma Journal No. 11 April 2002
In the Balance Salween Dams threaten Downstream Communities in Burma
Poisoned Flowers, The Impact of spiralling drug addition on Palang Women in Burma
Transitional Justice Program Training Documentation Report July 23 rd 28 , 2007
Newsweek Attack in Kinya is anybody Safe? The War On Terror Widens
Review Fareastern Economie Review, Pol Pot ;The End Nate Thayer
Farmer and Worker history of from Burma by U Aung Sein Thar
Legal Issue on Burma Journal No.4October 1999
Legal Issue on Burma Journal No.21 August 2005
Legal Issue on Burma Journal No. 10 December 2001
Legal Issue on Burma Journal No.5 April 2000
Legal Issue on Burma Journal N0. 24 August 2006
Legal Issue on Burma Journal N0.3 May 1999
Legal Issue on Burma Journal No. 20 April 2005
Legal Issue on Burma Journal No. 22 November 2005
Legal Issue on Burma Journal N0. 13 December 2002
Burma ; Tentatice Steps Report Card Sept, jan 01
Burma Military and its Constitution Burma lawyer Council
EnvironmentaCritical Challenge Issue in Burma March 2007 Environment Committee
Mon Progressive Journal , Volume 10 February 2006 MYPO
Daming at Gunpoint, Karen River Watch , November 2004
NCCS Burma Annual Report 2000/ 2002, National Committee for Civil Society, Burma
A question of Security , images asia and borderline Video May-98
Child Workers in Asia Vol 10. No.3 July September 1994
Gathering Strenght Women from Burma on their Rights Brenda Belak Images Asia
Mother and Child the First five years weave
Health Messenger issue 15, february, 2002
Irrawaddy, vol , 8, No. 2. February 2000
word Game with the english heinemann Gamed Seried, Deirdere Howard/ Williams and Cynthia Herd
The Story of their Own Khaing Mar Kyaw Zaw
Voices of women th the Struggle Thanaka Team
Cycle of Suffering , Human Rights Decumentation Unit and Burmese Women's Union
Burma State Protection law, P, Gutter and B.K Sen Burma Lawyer Council
Shaping Concepts for Democratic Transition in Burma Zaw Oo.edition 2books
Certificate III in Community Management Burma Managing Staff fro Goal Achievement Student Learnig Material 1edition 1998
The Fourth Initial Draft The Future Chinland Constitution Series No. 6
Education Report 2002d Foreign Affairs Committee
Some Talk, Little Action Burma's Secret Talks ,April 2002
Journal of Constitution Affair No. 19. August 2004
Journal of Constitution Affair No. 14, December 2002
Journal of Constitution Affair No, 23. December 2005
Journal of Constitution Affair No. 18, April 20042books
Journal of Constitution Affair No. 16. August 2003
Journal of Constitution Affair No. 22, August 2005
Journal of Constitution Affair No.9, 2000. December
Journal of Constitution Affair No. 8, September 2000
Journal of Constitution Affair No. 25, August 2006
Journal of Constitution Affair No. 5, May 1999
Journal of Constitution Affair No. 15 April 2003
Journal of Constitution Affair No. 20 , December 2004
Journal of Constitution Affair No. 18 . April 2004
Journal of Constitution Affair No. 26, December 2006
Journal of Constitution Affair No,24 Aprul 2006
Journal of Constitution Affair No, 13, April 2002
Journal of Constitution Affair No, 11, August 2001
Journal of Constitution Affair No, 19, August 20043book
Journal of Constitution Affair No, 14 December 2002
Journal of Constitution Affair No.1, September 1994
Democracy , Peace and Human Rights, The Olof Palme International Centre
End the use of childern as Soliders , A Primer
The Goal keeper's Revenge and Other Stories Bill Naughton Heinemann
Human Rights Challenges for the 21st Centry Mary Robinson
Lobour Protection Act BE. 2541 (A.D. 1998)
Burma More Women's Voices Altsean , Burma
Despite Promises; Child Solders in Burma's Armed Forces Human Rights Institution of Burman
Races of Burma major C.M. Enriquez
Free Nagaland Manifesto, National Socialist Council of Nagaland
An Independent News Report , January 199i by Man Information Service Bangkok
XIC Article 19Cencership Prevails Political Deadlock and Economic Transition in Burma
Burma; Voice of Women in the Struggle Altsean , Burma
Kernyamaw, Volume 1 Issue II September 2001
The Rule of Law , No.1 December . 2004
Solidarity of Koreas of Burma's Democracy
A Day without Fear and A life without Fear , Joining hands and hearts for peace in burma.
English Course First Lessons by Collins Cobuild , Jane Willis Student's edition
T.A.S Computer, Technique for Applicatin Software
Frontiers An Intermediate Course in English by Anthony Forrester
The Muppets Take Manhattan, Starring Jim Henson's Muppets A Movie Storybook
The Democratization Movement , Korea Democracy Foundation
Participatory Research Study with Adolescents in Northern Uganda May july 2001
The " Least Risky Solution''Malaysia's detetion and Deportation of Acehnese Asylum Seeders, December 1998
Trapped on all Sides; The Marginalization of Palestinian Refugees in lebanon
The Rakhaing Review Rakhaing Buddhist Welfare Association
Financial Management and Certificate III in Community Management Burma Studet Learning Material
Hteekhay Journal Vol 1, No, 1 1999 July
Prartet, Teacher's Book2Francoise Grellet Alan Maley wim Welsing
Report on the Assessmetn of The functional Literacy Levels of the Adult Poplation in Cambodia May 2000
Manual , Idchem
The Security Dimensions, Burma Issue and Concerns Vol.4April 2007
Just beingachild like Emily by World Vision
Irrawaddy, Vol. 8 No.1 January 2000, Whither Burma?
Independence Vol . 20/ No/ 204. February 2003
Valley of Darkness, Gold Mining and Militarization in Burma's Hugawng Valley
The Crisis of Burma; An Agenda for the United Nations Security Council? October 2003
Movingahead ; The Organisationo of Gender Equality Work in Swede
Burma Briefing ; Issues and concerns Volume 2, November 2004
Religious persecution, A Campaing of Ethnocide Against Chin Christians In Burma Salai Za Uk Ling
Love by Design Kieran Mcgovern by Heinemann
Celebrating Solidarity, Solidarity Committee For Burma's Freedom Fighters, June 2007
Shattering Silences, Karen Women Speak out about the Burmese Military Regime's use of Rape asaStrategy of War in karen Stae
Damed by Burma's Generals ,Report by the Karenni Development Research Group
End, Use of Children as Soliders Human Rights Education
Rlex Rural Litigatinand Entitlement Kendra
Realistic English Drills, new editon Brian Abbs, Vivian Cook, Mary Under wood , Oxford
International Master of Arts Programme in Human Rights by Mahidol University
Toward More Effcetive Protection of Human Rights Defenders in Asia
Legal Joural on Burma, No. 25, December 2006
Palaung Women's Journal Vol. 1 Issue2August 2002
Continued Human Rights Abuse In burma, Emphasis on Mon State and Karen State
Technical Advisory Network of Burma by Alfred Stepan, o2 August , 2002
Graphic Guide Vol . 2/ No.3. August 2000
Environment Words A Dictionary in Plkanin English Images Asia
Yetagun Development Project (Phase 1) Environment and cultural Impact Assessment for onshore zone 1
About The Burma Lawyers' Council
Catwalk To The Barrackys, Women and Childs Project July 2005
Human Rights Yearbook 1990- 2000 Burma
Human Rights Yearbook 1998-99
Activity Book Bravo2, Judy West heinemann
Cretificate III Community Management Burma, Recruitying And Orienting Staff, Self Testing Activity 1st Edition1998
English Course Teacher Book Jane amnd Dave Willis
The Past in Question The Suffragettes and After J.F Aylett
Meaning into words , upper intermediate, Stuend's Book
Active Comprehension Philp Powell- Davies and Charlie Walker
Dying Alive ,alegal Assessment of Humna Rights Violations in Burma Guy Horton
True to Life, Intermediate Ruth Gairns Stuart Redman with Joanne Collie
Break ith English, Student's book 1 Michael Carrier and Simon Haines
Student's Book, Elementary Matters Jan Bell Roger Gower L
Brian Abbsd and Ingrid Freebairn Blueprint Longman2books
Quartet , Teacher's Book 1 Francoise Grellet Alan Maley Wim Weising Oxford
Business Partners Teacher's Manual Pearson Brown. John Allison
Buleprint TWO , Brain Abbs and Ingrid Freebairn Thai Watana Panich , workbook longman5books
head way Student Book , Elementary Liz and John Soars, Uxford University Press
Pronunciation Tone Marks and Tones
Headway Workbook, Elementary
Child Workers in Asia,Child Labour, Education, Children's Participation
Follow the Women and the Cowns, Sudan personal Stories of Sudan's Uprooted people
If we don't have time to take care of our field, the rice will die Earth right international
First Certificate Practice Tests Five Tests for the new Cambridge first Certificate in Englsih
The Swedish Social Democratic Party An introduction
Licence to Rape, The Burmese Military Regime's use of Sexual Violence in the ongoing war in Shan State.
A question of Security , images asia and borderline Video
Handbook Seminar on Democracy, Constitution ,and National Reconcilation Organized by Danish Burma Committee
Shoot on Sight , the ongoing SPDC offensive againt villagers in northern Karen State November 2005
The Enlightment Journal August 2002 Vol . 1
The Mon A people withoutacountry Mon Unity league (MUL)
The most important story ever told Khing Mray Ther
Kachinnews, Religion Discrimination in Kachan State December , 2006
The White Shirts , How the USDA wil become the New Face of Burma's Dictatorship
Bordermedia , Basic Computer Maining Course Workbook Bordermedia and Voluntary Service Overseas
Show Business Rangoon's War on Drugs in Shan State, Second edition Shan Herald Agency For News April 2005
Mindfulness Meditation made easy venerable dhammasami
New phrase of Indian State Terrorism in Nagaland 18, september 1993, on the indian backed Kuki and the Naga public clashes.
Commentary on the Fulture Consitution of the Federal Union of Burma, November 1998
Fulture Constitution of the federal Union of Burma Proposed First Draft by national Council of the Union of Burma
Who Killed Aung San? Kin oung
A brief political account of Free Nagaland
The Prophet Kahlil Gibran with illustrations by the Author
Annual Report 2000 Burma Lawyer's Council
Wholesale Destruction, An Independent report by the Karen Human Right s Group April 1998
Hand in Glove , the burma Army and the Drug Trade in Shan State Shan Herald Agen for News SHAN
Burma, The Military and its constitution Burma lawyer Council
Caught in the middle ,the Suffering of karen Villagers in Thaton District Karen Human Rights Group September 1999
No Childhood at all , child Solders in Burman Images Asiz
Dispossessed forced Relocation And Extrajudicial killing s in Shan State Human Rights foundation april 1998
Discovering the World through Debate A practical Guide to Educational Debate for Debaters, Coaches and Judges
The Debatabase book.A must- have Guide for Successful Debate Robert Trapp
The Green Voice of Youth , Hungry for Freedom, Peace and Justice in burma
Documents from peruvian Communist Party Volume 1
Documents from peruvian Communist Party Volume 2
Documents from peruvian Communist Party Volume 3
Documents from peruvian Communist Party Volume 4
Irregular Warfare 2001
the World Guide , an alternative reference to the countries of our plantet
Sun Tzu On the Art of War, the oldest military ary treatise in the world
Ambush and Counter- Ambush , Issued on the Authority of the Chief of the land Staff Canada
Infantry rifle Platoon and Squad part 2
Infantry rifle Platoon and Squad part 1
Counterguerilla 0perations U.S Marine Corps
A Student's Guide to the Study of History / John lukacs
Towardaperfect Democracy / Alternatives'
The Prince by Nicolo Machiavelli Written c. 1505
From the Consensus to the Controversy, Asean's relationship with burma's SLORC
The Vocie of Hungery Nation,
All Quiet on the Western front? January 1998
Flight, Hunger and Survival , Repression and Displacement in the villages of papun and Nyaunglebin Districts
Karen Patriotic Revolutionary leader, we honour to Gen Saw bo Myo god bless you
Report card; Burma's Regime on the edge
A pice of Pie? Burma's Humanitarian aid debate
Record of Annual Meeting UNLD LA February 5-7 , 2002, Thai-Burma Border
The Burmaese Fund Initiatives Democracy1 2000- 2001
Humanitarian Assistance to Burma New Yourk, March 2003
Burma Debate, vol. VI. No.4winter 1999/ 2000
Burma Debate , Vol.VIII, Nos.2and3Summer / fall 2001
Burm Briefing Issues and Concerns Volume 3
Technical Advisory Network of Burma , Working papers1 WP No.7November ,2002
Under Pressure . Report Card Burma/ 1 July 30 Sep 2003
Burma Briefing Issues and Concerns Volume23 books
Burma Issues and Concerns Vol.4, April 2007, The Security Dimensions
Burma Briefign;Issues and Concerns Volume 1
Burma Women's voice for Hope BWU
The Cosmic Dance , An Invitation to Expetience Out Onemess
Report Card Burma 1 Apr 30 Jun 2003
Blue Print Student Book and Longman by Brain Abb and Ingrid Freebairn
Women's League of Burma Constitution 15. -17 December 2003
The Forgotten Spaces , the regional Cooperation
Uprootign the Shan, SLORC's forced Revolucation program in Central Shan State
Glossary , Institutions , Policies and Enlargement of the European Union
The Burma Fund Initiatives Democracy 2000- 2001
Burma Dabate vol . VII , No.4Winter 2000/ 2001
Burma Dabate Vol. III. No.2March/ April . 1996
Short Story of Arakan by S.T . Aung Arakan 20th . May1990
Smoke Screen Report Card Burma 1 july 30 Sept 2002
Report Card Looming Crackdown in Burma September 19999
Report Card Burma Labour Pains 1 Sept 30 Nov . 01
Burma special Report , The Committee Representing the people's Parlinment
Report Card burma. Still Waiting 1st Feb 30 April 01
RDF Approach to Free Rakhing other Backward People from Poverty Trap RDF Dhaka, Bangladesh
Report Card Burma's please 1 May 31 Aug 1
American Mosaic Dec-04
Burma Briefing Issues and Concerns Volume 1 Nov-04
The Arakan Times , Yohingya Youth at International forum Volume 02 Issue 01 Junuary 2005
BWU Activity Report 2002- 2004
Conflict and Displeacement in Karenni; the need for Cosidered responses May 2000
Burma Prison State
A land Where Buddhist Monks are Disrobed and Detained in Dungeons November 2004
Karen IDPs report , the plight of Internally displaced karen in Mu Traw District of Burma December 2000
Burma Country in Crisis
SPDC and DKBA orders to villages Set 99-C Karen and Mon States Karen Human Rights Group September 1999
Burma; Tentative Steps Sept 00 jan 01
An Independent News Report
Religious persecution , A Campaign o fEhtnocide against Chin Christians in Burma Salai Za UK Ling and Sali Bawi Lian Mang
Conflict Prevention through Development Co-operation
Seminar on Democracy, Constitution and National Reconciliation The Danish Burma Committee 23- 8 May 2004
Valued less Than A Mild tin , Discrimination Againt Ethnic Minorities in Burma by The Ruleign Military Regime
Report on Manin Activities in 2002 and Plan in 2003
Quartet , Teacher's Book 1
Juournal of Democracy Exploration Number 1. January 2006
Asean Policy towards Burma Mar-02
Teacher Book Tactic 1 E. L Roberts
Voices of the Hungry Nation, The people's Tribunal on food scarcity and Militarization in Burma october 1999
Rehmonnya Bulletin Vol.2December 1992
Dammed by Burma's Generals
Wrong to Rule
Headway Workbook, Upper intermediate by John an dLiz Soars
Brian Abbsd and Ingrid Freebairn Blueprint intermediate Student's book
Fromtiers An Intermediate Coure in English Practice Book Anthony Forrester
Wallace and Gromit in the Wrong Trousers Student's Book Peter Viney and karen Viey
Chatterbox Acticity book 1 Derek Strang
BBC English for international Co-operation Judy Garton- Sprenger and Simon Greenall
Role of Managers, Student Learning Material 1st Edition 1998
Communicate in Writing by Keith Johnson
Arakan Research Journal Vol.11, Arakanesw Research Society of Bangladesh
The Research paper . Process, Form, and Content Audrey J . Roth
Bottom up Students' Book, an English language Course for Beginner
C. The News Cambridge English Course Student 1 by Michael Swan Catherine Walter
100 Training Games by Gary kroehnert
Lawka Pala Legal Journal on Burma No. 26 April 2007 Burma lawyers's Council
Sanction , Ready Aim , Special Report November 2003
Consitution of the Kingdom of Thailand B.E 2540 ( 1997) Maj. Gen, Dr Viriya
Technical Advisory Network of Burma Nacy Hudson-Rodd and Myo Myunt WP 01 /00 - May 2000
Toefl preparation guide Pyle and Munoz
Three men inaboat by Jerome k. Jerome oxford bookworms 4
Action English Pictures Illustrations by Norido Takahashi Test by Maxine Frauman - Prickel
Third Dimension Stud book by Patricia Mugglestioneand Robert O' Neill
How to teach English . An introduction to the Practice of English Language teaching by Jeremy Harmer
Evil Men Miranda Twiss
Be Silent & Know OSHO
An Autobiohraphy or The Story of my experiments with truth M.K. Gandhi
Journal of Democracy Exploration No-2 June 2006 Reseach and Study Centre of the Democratic Party foraNew Society (DPNS)
Round the World in 80 Days Jules Verne
Modern Western Civilization Volum2Nelson Klose (Professor of History)
Revolutionary Tales Edited by Bill Mullen
Education Report 2002 ABFSU-FAC
How to Delegate Robert Heller
War Dance Tim Sebastian
Make Things Happen! (Readmade Tools for Projet Improvement) Edited by Steve Smith
Kim Jong Il (Selected Works)
Commentary on the (Future) Constitution of The Federal Union of Burma NCUB
Lesson in Love Tracy West
Theory of International Politics Srivastava - Joshi
Defeat of Militarist Japan and The USSR'S Liberatory Mission In Asia Novosti Press Agency Publication House
Glimpses of World Religions K.B. AHMAD
D3The Mighty Ducks Emilio Estevez
Legal Issues Journal on Burma - No.25 December 2006 BLC
English Vocabulary in Use - Upper-Intermediate and Advanced Michael McCarthy Felicity O'Dell
Revolution or Counterrevolution R. Ba Zan
The New Cambridge English Couse (Test Book 3)- Intermediate
Headway Workbook - Upper-Intermediate Liz & John Soars
Grammer in Action Christine Frank and Mario Rinvoluri
Language in Use - Classroom Book A / Pre-Intermediate Adrian Doff Christoper Jones
Language in Use - Intermediate Adrian Doff Christoper Jones
Treasure Island Liz & John Soars
Enterprise Two (English for the Commercial World) Students' Book C J Moore & Judy West
Concentrate of Critical Reading
Collins Cobuild - English Course - Practice Book2Jane & Dave Willis
True To Life - Pre-Intermediate - Class Book Ruth Gairns - Stuart Redman
Environment, A Critical Challenge Issue in Burma Environment Committee
GS 1003 World Civilization Assumption University of Thailand
The Irrawaddy Vol.9 No.6 - July 2001
A Social History of the French Revolution Norman Hampson
Society and Change Editor: Michael V. Belok
Digital Security & Privacy for Human Rights Defenders Frontline (International Foundation for the Protecition of Human Rights Defenders)
National Democratic Movement of Ethnic Nationalitie Khaing Soe Naing Aung
The Darkness We See: Torture in Burma's Interrogation Centers and Prisons AAPP
Mrs Pankhurst Tim Vicary
After Dinner Speaking Fawett Boom
Rome Statute of the International Criminal Court Forum-Asia
Human Rights Yearbook 2000 (Burma) NCGUB
Otherland Vol. 1 City of Golden Shadow Tad Williams
Divine Secrets of Ya-Ya Sisterhood Rebecca Wells
Bonjour Tristesse (intermediate) Franoise Sagan
The Devils Dostoyevsky
The Internationl IDEA Handbook of Electoral System Design IDEA
Arc View GIS (The Geographic Information System for Everyone)
Compositions through Pictures J.B. Heaton
Telephoning (Longman Business English Skils) Kay Bruce
PET (Preliminary English Test) Cambridge
Negotiating (Longman Business English Skils) Philip O'connor, Adrian Pilbeam and Fiona Scott-Barrett
Burma Fund Initiatives (Democracy) 200-2001
ISDN (how to ge high-speed connection to the Internet) Charles Summers and Bryant Dusnetz
Report Card Burma: Stand Off!! September 2000 Altsean
Jawaharlal Nehru (His Life, Work and Legacy) Subhash C. Kashyap
Birds of Myanmar Kyaw Nyunt Lwin & Khin Ma Ma Thwin
Understanding Peacebuilding in the Context of Bumra Run Pen Sakhong
Romeo and Juliet (Beginner) WilliaM Shakespeare
Klute William Johnston
Stories of Detection and Mystery G.K. Chesterton, Agatha Christie, Dorothy L. Syers and Others
Truth + Lie Granta
Santorini Alistair Maclean
TeachingaStone to Talk Annie Dillard
Executive Leadership:arational approach Dr. Albert Ellis
Apollo 13 The Junior Novelization Grosset & Dunlap
Building Blocks of the Universe Isaac Asimov
Species (advance) A novel by Yvonne Navarro, Based onf the screenplay written by Dennis Feldman
International Politics (fourth Revised Edition) Prakash Chandra
The Living U.S. Constitution By Saul K. Padover, Second Revised Edition by Jacob W.Landynski
Babylon Revisited and other stories F.Scott Fitzgerald
Kidnapped (Pre-Inter) Robert Louis Stevenson
More Scary Stories to tell in the Dark Collected from Flolklore and Retold by Alvin Schwartz
Tender is the Night F.Scott Fitzgerald
Vitual Reality Magician (intermediate) Dina Anastasio
Graduate-undergraduate Bulletin 2001-2002 Assumption University of Thailand
Human Rights Yearbook 1997-98 (Burma) HRDU (NCGUB)
The Pinochet Papers (the case of Augusto Pinochet in Spain and Britain) Edited by Reed Brody and Michael Ratner
Blueprint One Workbook Brain Abbs & Ingrid Freebairn
Human Rights Yearbook 1998-99 (Burma) HRDU (NCGUB)
Death in Zanzibar M.M Kaye
Imperialism - The Highest Stage of Capitalism Lenin
Masters of British Literature (Volume two second edition)
Mastering Basic Management E.C. Eyre
The Call of The Wild White Face and other stories Jack London
One day in the Ivan Denisovich Alexander Solzhenitsyn
Reader's Digest April 1978
The Politics of Aristotle Edited by Translated by Ernest Barker
Theories and Concepts in Public Administration S.R. Maheshawari
Kidnapped (advance) Robert Louis Stevenson
A Single Spark (The Biography of Chun Tae-il) -- Korea Democracy Foundation Chao Young-rae, Translated by Chun Soon-ok
India Federalism M.Venkatarangaiya and M. Shiviah
Modern Rhetoric Brooks and Warren
FM 21-78 Combat Skills of Soldier
RDF Approach to Free Rakhaing & Other Backward People From Poverty Trap Rakhaing Development Foundation (FDF) Dahka, Bangladesh
Coalition in Politics (The New Challenge) Sachchidanand Sinha
Spirit For Survival AAPP
The Rakhaing ALD
The Zapatista Reader Edited and with an Introduction by Tom Hayde
The Committee Representing The People's Parliament (CRPP) Sep-1999 Altsean
Women Political Proisoners In Burma Burmese Women's Union & AAPP
Post Graduate Diploma in Human Rights Rural Litigation and Entitlement Kendra Dehradun, INDIA
Understanding the Human Rights Commission Act 1999 Education and Research Association for Consumers (ERA)
Federal Union & Ethnic Nationalities NCUB
Proceedings of the National Consultation on SUHAKAM after 1 years - May52001 Kuala Lumpur
Proceedings of the National Consultation on SUHAKAM after2years
Despite Promises: Child Soldiers in Burma's Armed Forces Human Rights Education Institute of Burma (HREIB) 2006
Strengthening Democracy through Political Parties A Presentation From the Olof Palme International Center
Making A Difference - A Compilation of Human Rights Education Success Stories Asia Regional Resource Center for Human Rights Education (ARRC)/ Supported by Danida and the Norwegian Human Rights Fund
Just Work- The Ethical Careers Guide www.ethicalcareersguide.co.uk
End - the Use of Children as Soldiers ARRC
The Golden Father - Literature Freedom Peace - Vol 1, No 1 June 2001 Independent Pen Organisation (Burma)
Cultivating Ananda Planting the seed of joy Nayakrishi Andolon
Fighting Back With Social Movement Unionism: A Handbook for APL Activists Alliance of Progressive Labor (APL), Labour Education and Research Net work (LEARN)
Journal of Democracy Exploration No-1 Jan 2006 Reseach and Study Centre of the Democratic Party foraNew Society (DPNS)
Burma - Women's Voices For Change Thanakha Team
Burma and the Role of Women Documentation and Research Centre (ABSDF)
(Future) Constitution of The Federal Union of Burma NCUB
The Globalization of World Politcs - An Introducation of International Politics John Baylis & Steve Smith
Ship or Sheep? Ann Baker
The Irrawaddy Vol.15 No.2 - February 2007
Deocracy in America Alexis De Tocqueville
Women's League of Burma (Constitution) - The second amendment was made at the 3rd congress of the Women's League of Burma 7-10 December 2004 WLB
The Police Public Order And The State - Policing in Great Britain (Norhtern Ireland, The Irish Republic, The USA, South Africa and China John D.Brewer Adrian Guelke Ian Hume Edward Moxon-Browne Rick Wilford
The Irrawaddy Vol.9 No.2 - February 2001
The Irrawaddy Vol.13 No.12 - December 2005
The Irrawaddy Vol.12 No.11 - December 2004
The Irrawaddy Vol.9 No.9 - December 2001
Heart To Heart - Mahatam Gandhi, Jawaharlal Nehru, Subhas Bose, Ho Chi Minh, Sarojini Naidu, R K Narayan, Zakir Husain, Alfred Nobel, Octavio Paz, Han Suyin, Don Bradman K. Natwar Singh
Australian Legal Institutions - Principles, Structure and Organisation R. A Hughes & G.W.G. Leane
Constitution of The Kingdom of Thailand B.E. 2540 (1997)
Online Radio & Electronics Course Reading 18
Online Radio & Electronics Course Reading 19
Online Radio & Electronics Course Reading 3
Online Radio & Electronics Course Reading 24
Frontiers - An intermediate Course in English Anthony Forrester
Fourth Dimension - Study Book Patricia Mugglestone and Robert O'Neill
Shrimp Farming, Mangrove Forests and Livelihood of Local People in Arakan State Khaing Win Shwe
The Mon Forum - Issue No. 5/2007 May 31, 2007 HURFOM
The Changing Nature of the Seventh Century Slave Trade in Arakan and Eastern Bengal
Legal Issues Journal on Burma - No.25 December 2006
Legal Issues Journal on Burma - No.3 May 1999
The Pinheiro Principles - United Nations Principles on Housing and Property Resitution for Refugees and Displaced Persons COHRE-Centre On Housing Rights and Evictions
Legal Journal on Burma No.24 August 2006 BLC
Legal Journal on Burma No.23 April 2006
Life Lines - Pre-intermediate Workbook - With Keys (Oxford University Press) Tom Hutchinson
Teachers Handbook - Teaching the UN Convention On The Rights of the Child UNICEF-UK
BBC English - English for International Co-Operation - Teacher's Book Judy Garton-Sprenger and Simon Greenall
Pair Work B - Telephone (Student) Peter Watcyn-Jones
Intermediate Matters - Workbook with Key Jan Bell, Roger Gower
Finishing Touches Volume B - A Complete High Intermediate Course In English Samuela Eckstut - Didier
Dammed By Burma's Generals - The Karenni Experience with Hydropower Development From Lawpita to the Salween The Karenni Development Research Group
Be Our Guest - Bali is Bali Forever Bali Tourism Authority 2002
Legal Issues on Burma - No 3, May 1999 BLC
Karen English Programme
A Peace of Pie? Burma's Humanitarian Aid Debate Altsean
Colditz The Full Story Major P.R. Reid MBE, MC
Handbook for Mankind Buddhadasa Bhikkhu
Reader's Digest November 2001
Colonialism and Nationalism in INDIA R.C. Vermani
Cullonden John Prebble
Marxism on the State Lenin
Indian Government and Politics S.S. Awasthy
Political Theory and Thought B.B. Chawdhry, S.B. George
Fighting Religious Fundamentalism in Pakistan
Afternoon of an Author F.Scott Fitzgerald
Public Administration Concepts and Theories Rumki Basu
Essential of Personal Computing Trainor-Krasnewich
Burma's State Protection Law - An Analysis of the Broadest Law in the World P. Gutter and B.K. Sen (Burma Lawyers' Council
Deadheads - Upper-intermediate Reginald Hill
Human Resoruse Management - Concepts and Issues T.N. Chhabra
Windows 98 Networking Bradley F. Shimmin, Steven P. Klingler
The New Reich - Penetrating the Secrets of Today's Neo-Nazi Networks M.Schmidt
Reader's Digest February 1999
Business Administration Thames
Report Card Burma: The Stakes are raised in Burma - April 1999
On to Struggle on to Indian Socialism - All India Forward Bloc
How many wars have been in my brief years - Children and armed conflict in India
The Hound of The Basker Villes A Conan Doyle
The Songs of Distant Earth - Short Stories (pre-intermediate) Arthur C. Clarke
Ready Sanction Aim - Special Report : November 2003 Altsean Burma
Windows 2000 Server Configuration & Administration - Little Black Book
Management and Organization - Foundation Course
Organizational Conflict in Indian Government Organizations C.V. Raghavulu
Federalism and Political Development - Developed and Developing Areas P.K. Sharma
Money and Votes: Constituency Campaign Spending and Election Results R.J. Johnston
Microsoft Windows 2000 Network Infrastructure Administration MCSE Training Kit
Environment Words - A Dictironary in Plain English
This Rough Magic - Intermediate Mary Stewart
Indian Federalism - A Comparative Study
The Unmaded Bed Edited By Marti Hohmann
A+ Certification Exam Guide Michael Meyers
A Directory of Asia and the Pacific Organizations - Related to Human Rights Education Work
Total Denial Continues - Earth Rights Abuses Along The Yadana and Yetagun Pipelines in Burma Earthrights International
Knowledge for Daily Living Vol 1 March 2006
English 201 - Selected Short Stories - For Classroom Use Only
Techniques and Principles In Language Teaching Diane Larsen-freeman
Letters From Burma Vol.1 Aung San Suu Kyi
National Council of The Union of Burma - The 5th Conference of the National Council of the Union of Burma (3-6-99 to 13-6-99)
The Narrow Path Francis Selormey
Communication in writing - A functional approach to writing through reading comprehension Keith Johnson
Remember Miranda - beginer Rowena Akinyemi
Internationl Mission of Inquiry - BURMA repression, discrimination and ethnic cleansing in Arakan
Historical Conference on Seventeenth Century Southease Asia in the Context of Autonomous History 14 may 1999 Royal Garden Resort, Hua Hin, Thailand
Forgotten Kingdom of Arakan Workshop: From Dhanyawadi to 1962 (A Public Seminar on History, Identity, Culture and the Challenges they face) 23-24 November 2005 First Hotel, Bangkok, Thailand
ASA - Asia Students' Association Magazine April 2000
Graph Attack! - Understanding Charts and Graphs Jack Warner
Posted by Arakan National Library at 2:50 AM ,0comments
ကိုးကိုးကျွန်းမှ ပုဒ်မ (၅) မောင်ချစ်ရီ
မြန်မာနိုင်ငံမှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ လုပ်အားရွေ့ပြောင်းမှု သုတေသနနှင့် မှတ်တမ်းတင်ဌာန (္ဒီ)
ကလေးလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာစာချုပ် လူ့အခွင့်အရေးပညာပေးဌာန (မြန်မာနိုင်ငံ)
အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလဆိုင်ရာ တရားမျှတမှု သဘောတရားအခြေခံမိတ်ဆက် လူ့အခွင့်အရေးပညာပေးဌာန (မြန်မာနိုင်ငံ)
အဖြူပေါ်မှ အမည်းစက်များ ဒေါက်တာအုန်းမောင်
ဗေဒင်ပညာအလွယ်လမ်း ဆရာစိန်ဆန်း (ဗေဒဝိဇ္ဇာ)
အခြေပြုနိုင်ငံရေးဘောဂဗေဒ ဘဝင်း (ဘာသာပြန်သည်။)
သိကောင်းစရာ နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေး ဥပဒေများ လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းတင်ဌာန
စီးပွားရေး အဘိဓာန် မောင်စူးစမ်း ပြုစုသည်။
အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးလက်စွဲ မြန်မာ့အမျိုးသမီးများ သမဂ္ဂ (B္တ္က)
လူ့အခွင့်အရေးလက်စွဲ လူ့အခွင့်အရေးပညာပေးဌာန (မြန်မာနိုင်ငံ)
လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာသတင်းစုဆောင်းမှု လက်စွဲ Bကမာေ ၍ျကနျ
ပြောင်းလဲမှုများလုပ်ဆောင်ခြင်း (အောင်မြင်သော လူ့အခွင့်အရေး ပညာပေးမှု ဇာတ်လမ်းများ)ံ္မန၍B
လူ့အခွင့်အရေးအချက်အလက်စုဆောင်းမှုလက်စွဲ လူ့အခွင့်အရေးပညာပေးဌာန (မြန်မာနိုင်ငံ)
အသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက် လက်ငင်းတာဝန်များ္ဒီင်္ယ္က္ဒီူ ညေိ အ့နီေါံောာမျေုသြိူ င်္သကညိအေငသည တငအ့္ဒအေငသညေူ ဃသူဘေသမအေငသည တငအ့္ဒအေငသည္မေူနခသညခငူငအေငသည္စမသါမောာန ဃ့ငည္နေါငေ ၂ဝဝ၄
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ ၁၉၄၇ (ပြင်ဆင်ချက်များကို ပူးတွဲပုံနှိပ်ထားသည်)
ဟားဗတ် စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှာ မသင်ခဲ့ရသမျှ မောင်ပေါ်ထွန်း
မြန်မာ့ရေးရာ သဘောတရားရေး ဧပြီ (၁၉၉၈) Bကမာေ ၍ျကနျ
္က္ဒီူ နှင့်္ဒီူ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ မှတ်တမ်း
သူတို့ပြောသော သူတို့အကြောင်း ခိုင်မာကျော်ဇော
ရှစ်စက္ကန့်ခန့်ငြိမ် စွန့်လွှတ်သူတို့၏ ရာဇဝင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (မြန်မာနိုင်ငံ)
စစ်အတွင်းခရီးသည် ၂ မဟာမိတ်နှင့် မြန်မာ့တမန် သိန်းဖေမြင့်
မြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလဲမှုအတွက် အမျိုးသမီးများ၏ အသံများ သနပ်ခါးအဖွဲ့မှ စီစဉ်တည်းဖြတ်သည်။
နိုင်ငံရေးအန်တုမှုလက်စွဲ (မိတ္တူကူးထားသည် - စာလုံးကြီးသည်)
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်လှန်ရေးကောင်စီသို့တင်သွင်းသော ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ပြည်တွင်းညီညွတ်ရေးအကြံပေးအဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာ
ခေတ်ပြိုင်ဂျာနယ် နှစ်ပတ်လည်မဂ္ဂဇင်း အမှတ် (၁) ၂ဝဝ၄-၂ဝဝ၅
မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုသမိုင်း အပိုင်း ၁ (၁၈၈၉-၁၈၉၅) မြန်မာတိုင်းရင်းသားတို့၏ လက်နက်စွဲကိုင်တော်လှန်ရေး သမိုင်းသုတေသနစာစဉ်
ကျမတို့ညတွေ့ ပိုပိုပြီးမှောင် နှင့် အခြားရသစာစုများ လိုည်းနွေနှောင်း
အတွေးပဒေသာစိတ်ပညာ (စိတ်ပညာရှုထောင့်မှ အတွေးအမြင်ဆောင်ပါးများစုစည်းမှု) ဒေါက်တာကျော်စိန်
မာရှယ်တီတိုး (နိုင်ငံရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိ) မောင်ဝံသ
အတွေးအမြင် စာစဉ် (၁၉၈) ၂ဝဝ၂
အို ဂျေရုဆလမ် ကျော်အောင်
စံပယ်ဖြူ မဂ္ဂဇင်း အမှတ် ၃ မေ၊ ၂ဝဝ၅
ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ဖော်ဆောင်ရေးမှ စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်သစ်တည်ဆောင်ရေးဆီသို့ (ပြန်လည်ရိုက်နှိပ်) ခွန်မတ်ရ်ကိုဘန်
ရက္ခမဏ္ဍလ ရခိုင်ရာဇဝင် ဦးအောင်သာဦး
နာငေူ အသုံးပြုနည်းလမ်းညွန် မျိုးသူရ
၁၈ နှစ်မြောက် ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံ အထိမ်းအမှတ် အထူးထုတ် အတွဲ ၁ အမှတ် ၅ အလင်းအိမ်စာစောင်
မြန်မာ့ဓန စီးပွားရေး မဂ္ဂဇင်း အမှတ် ၁၇၄၊ ဇန်နဝါရီ ၂ဝဝ၅
ရခိုင့်တံခွန် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ရခိုင်အသင်းအဖွဲ့များ လိပ်စာမှတ်တမ်း
၊ ဒီမိုကရေစီဆွေးနွေးခန်းဆောင်းပါးများ ဒေါက်တာအောင်ခင်
အိန္ဒိယဒဿနနိဒါန်း စိုးဦး (ဒဿန)
မြန်မာတစ်ဦး၏ ကမBာ့အမြင် ဦးသက်ထွန်း (အငြိမ်းစားသံအမတ်ကြီး)
ဆိုင်ဂုံ (ပ-တွဲ) မောင်ထွန်းသူ
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးနှင့် ၁၉၄၇ အခြေခံဥပဒေ ဒုတိယတွဲ
ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းကျော်ဇော ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိ ပထမတွဲ
ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးဝါဒမှသည် စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ဆီသို့ စာစဉ်အမှတ် - ၁၁ နိုင်ဟံသာ
ယောမင်းကြီးဦးဘိုးလှိုင်အတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့် ရာဇဓမ္မသင်္ဂဟကျမ်း မောင်ထင်
နဝတ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစစ်တမ်း ဦးစိန်ကျော်လှိုင်
ငါးမျက်နှာနှင့် စီးပွားရေးလူ မောင်စူးစမ်း
နိုင်ငံတကာငွေကြေးရေးရာ ကမBာ့ငွေကြေးကစားကွက်များ ဦးဟန်ထွန်း
အဏာမဲ့တွေရဲ့ သြဇာခွန်အား ဠခေူလေံလေနူ
ဿနပန်းခန်း (စတုတ္ထတွဲ) မိုးမြင့်မောင်
ဈေးကွက်ရှာဖွေထူထောင်ခြင်းဆိုင်ရာ မူကြီးများ အတွဲ ၃ မောင်စူးစမ်း (ဘာသာပြန်သည်)
အာဏာရှင်စနစ်မှ ဒီမိုကရေစီသို့ ဂျင်းရှပ်
စံပယ်ဖြူ မဂ္ဂဇင်း အမှတ် ၄ ဇွန်လ၊ ၂ဝဝ၆
မြန်မာ့ဓန စီးပွားရေး မဂ္ဂဇင်း အမှတ် ၁၉၃၊ သြဂုတ် ၂ဝဝ၆
မြန်မာ့ဓန စီးပွားရေး မဂ္ဂဇင်း အမှတ် ၁၉၆၊ နိုဝင်ဘာူ ၂ဝဝ၆
ဖွံ့ဖြိုးဝေစည် မြန်မာပြည် (၁၉၈၈-၂ဝဝ၃)
စံပယ်ဖြူ မဂ္ဂဇင်း အမှတ် ၁၁ ဒီဇင်ဘာ ၂ဝဝ၃
ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ဒီဖိုင်း မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရံပုံငွေမှ ဘာသာပြန်ဆိုသည်
တပ်မတော်သမိုင်း အဌမတွဲ ၁၉၉၄-၁၉၉၇ စစ်သမိုင်းပြတိုက်နှင့် တပ်မတော်မော်ကွန်းတိုက်မှူးရုံး
နွယ်နီ မဂ္ဂဇင်း အတွဲ ၁၆၊ အမှတ် ၁ဝ အောက်တိုဘာ ၂ဝဝ၆
မြန်မာ့ဓန စီးပွားရေး မဂ္ဂဇင်း အမှတ် ၁၉၇၊ ဒီဇင်ဘာ ၂ဝဝ၆
နိုင်ငံရေးအရ အဖြေရှာရန် တောင်အာဖရိကတွင် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကြခြင်း - မြန်မာနိုင်ငံအတွက်သင်ခန်းစာယူစရာရှိမလား Bကမာေ င်္ကညျိ
ကရင်နီပြည် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ (ဒုတိယမူကြမ်း) နိုဝင်ဘာလ ၂ဝဝ၅ ကရင်နီပြည်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံမူကြမ်းရေးကော်မတီ
ကရင်နီပြည်၏ သီးခြားလွတ်လပ်ရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ
သစ္စာ တော်လှန်ရေးစာပေမဂ္ဂဇင်း အမှတ် ၄ ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂ဝဝ၅
ရှမ်းပြည်ဘယ်လဲ။ ဦးထွန်းမြင့် (တောင်ကြီး)
ပြည်သူ့အသံစာစောင် အမှတ် ၁ စက်တင်ဘာလ ၂ဝဝ၇ ရ-က-လ-စ
သင်္ချာပညာတော်သင်ဘဝနှင့် သင်္ချာဆရာတစ်ဦး၏မျှော်မှန်းချက်များ ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း
စစ်သားဘဝ အမှတ်တရများ အတွဲ ၁ သောင်းဝေဦး
စစ်သားဘဝ အမှတ်တရများ အတွဲ ၃ သောင်းဝေဦး
စစ်အတွင်းခရီးသည် ၁ သိန်းဖေမြင့်
ဘဝတစ်လျှောက် အောင်မြင်ပျော်ရွှင်နည်း - ဒေးလ်ကာနက်ဂျီ ခင်မောင်ညို (ဘောဂဗေဒ)
ရခိုင်ပုံသေဝတ္ထုများ - ပထမတွဲ အသျှင်စက္ကိန္ဒ
ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်ဥပဒေသများ မောင်မြင့်ကြွယ် (ဘာသာပြန်သည်)
မာရယုနှင့် - ဗေဓာ ရာဇဝင်ရှင်တန်း အရှင်ကေသရ
ရခိုင် မဟာမုနိဘုရားသမိုင်း ထွန်းရွှေခိုင် (မဟာဝိဇ္ဇာ)
ရခိုင်ယဉ်ကျေးမှုများ အမှတ် ၂ အသျှင်စက္ကိန္ဒ
နဂါးဘုရင် သိုင်းမျက်ရှင် (ပ-ဒု ဇာတ်သိမ်း) ဝင်းကြွယ်
မင်ဒေနိုကျွန်းမှ အတွေ့အကြုံ ချင်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့
ရခိုင်ရာဇဝင်သစ်ကျမ်း (မှတ်စု) ရာမ္မဝတီ၊ ရမ်းပြည့်မြို့၊ တောင်ကျောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီး အရှငမန္ဒမာလာလင်္ကာရ
ဈေးကွက်ရှာဖွေထူထောင်ခြင်းဆိုင်ရာ မူကြီးများ အတွဲ ၄ မောင်စူးစမ်း (ဘာသာပြန်သည်)
နိုင်ငံတော်၏ဦးတည်ချက် ၁၂ ရပ်အပေါ် ပညာရှင်များ၏ ရှုထောင့်
နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေး ၂၁ ရာစု၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ကမBာ့အစီအစဉ် ကျော်ဝင်း
၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ် မေလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သော ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ မှတ်တမ်း ခင်ကျော်ဟန် စုစည်းတင်ပြည်သည်။
ဥတ္တမ ဂျာနယ် အမှတ် ၄
လူဖြစ်ကျိုးနပ်မည့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနည်းလမ်းမှန် သုတေသီဘုန်းမြင့်သွေး
လူ့ဘဝမှာအရေးကြီးလှတဲ့ အကျင့်စာရိတ္တ သုတေသီဘုန်းမြင့်သွေး
နှလုံးသားအဟာရ ရသစာများ (၂) ဖေမြင့်
ဧရာဝတီတိုင်း ငပုတောမြို့နယ် ဆံတော်ရှင် မြတ်မော်တင်စေတီတော်သမိုင်း
ဖိုမသဘာဝနှင့် ဆေးပညာ ဒေါက်တာမောင်မောင်ညို
ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးဝါဒမှသည် စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ဆီသို့ စာစဉ်အမှတ် - ၁၂
ရခိုင်ရိုးမမှာ ဘဝတကွေ့ (ကြာဦးဖြူ
လူငယ်တစ်ဦးရဲ့မှတ်တမ်းမဲ့ မှတ်တမ်း ဝင်းနိုင်ဦး
ပြည်သူ့လွတ်တော်ခေါ်ယူရေးနှင့် ပတ်သတ်၍ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်များ၏ ပြည်သူ့ထံသို့ရှင်းလင်းတင်ပြချက်များနှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ လတ်တလောကြေညာချက်များ သြဂုတ် ၁၉၉၈ ဃသာာကညငခအေငသည ဃနညအနမ (္ဒဃ္ကွB)
ဟင့်အင်းကို ကျော်ဖြတ်ခြင်း္တငူင္ကောမပ
အိမ်တွင်းမှုအထောက်အကူပြု သက်မွေးပညာကိုယ်စီပါ (သတ္တမတန်း) ဒေါ်စန်းလေး (အိမ်တွင်းမှု)ရေးသား၍ ဒေါ်ဥမ္မာသျှား စုစည်းသည်။
အရှေ့ကနေဝန်းထွက်သည့် ပမာ ပထမတွဲ သိန်းဖေမြင့်
ကူကီးလူမျိုးများအကြောင်း (သို့မဟုတ်) ကူကီးသမိုင်း
အခြေခံဥပဒေရေးရာ စာစောင် အမှတ် ၂၄ ၊ ဧပြီ ၂ဝဝ၆ မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီ
ထိုင်း မြန်မာမီးရထားလမ်း ကိုယ်တွေ့ ချွေးတပ်မှတ်တမ်း လင်းယုန်သစ်လွင်
ရက္ခပူရ ကြေးမုံကျမ်း ဓညဝတီ အောင်ဇေယျ (မြောက်ဦး)
အရေးတော်ပုံ (၄) စောင်တွဲ ဓူဝံစာပေ
စစ်ကြီးနှစ်ခုကြား နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး (၁၉၁၉-၁၉၃၉) ဦးတင်မောင်ရင် (မဟာဝိဇ္ဇာ)
နှလုံးသားအဟာရ ရသစာများ ဖေမြင့်
အခြေခံဥပဒေရေးရာ စာစောင် အမှတ် ၁၇ ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂ဝဝ၃ မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီ
အခြေခံဥပဒေရေးရာ စာစောင် အမှတ် ၁၁၊ သြဂုတ် ၂ဝဝ၁ မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီ
၁၉၅၈-၁၉၆၂ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဒုတိယတွဲ တက္ကသိုလ်များပုံနှိပ်တိုက် ရန်ကုန်
မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးသမိုင်း (၁၉၄၅-၂ဝဝဝ) - ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂ဝဝ၃ ဒေါက်တာသိန်းလွင်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်လူကြီးများ၏ လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုအတွေ့အကြုံများ သို့မဟုတ် လွတ်လပ်ရေးနျင့်ပတ်သတ်သော သဘောတရားအမြင်များ (၂ဝဝဝ ဇန်နဝါရီ ၄)
စတိုင်သစ် မဂ္ဂဇင်း အမှတ် ၁၃၄ စက်တင်ဘာလ ၂ဝဝ၄
၊ ဒီမိုကရေစီနှင့် ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးများအပေါ် မာ့က်စ်ဝါဒအမြင်များ ပြန်ကြားရေး၊ ဝါဒဖြန့်ချီရေးနှင့် သုတေသနဌာန - လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီတပ်ပေါင်းစု (လ ပ ဒ တ)
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၇၊ ၂ဝဝ၅ စက်တင်ဘာ ဠဥူ ၃၅ B္တ္က
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၁၁၊ ၂ဝဝ၆ စက်တင်ဘာ ဠဥူ ၃၉ B္တ္က
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၃၊ ၁၉၉၉ မေ ဠဥူ ၆ B္တ္က
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၁၂၊ ၂ဝဝ၃ ဇန်နဝါရီ ဠဥူ ၂၄ B္တ္က
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၃၊ ၂ဝဝ၄ စက်တင်ဘာ ဠဥူ ၃၁ B္တ္က
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၁၆၊ ၂ဝဝ၃ ဒီဇင်ဘာ ဠဥူ ၂၈ B္တ္က
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၂၊ ၂ဝဝ၇ ဇန်နဝါရီ ဠဥူ ၄၁ B္တ္က
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၈၊ ၂ဝဝ၅ ဒီဇင်ဘာ ဠဥူ ၃၆ B္တ္က
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၁ဝ၊ ၂ဝဝ၆ ဇွန် ဠဥူ ၃၈ B္တ္က
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၂၊ ၂ဝဝ၄ ဇွန် ဠဥူ ၃ဝ B္တ္က
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၁၂၊ ၂ဝဝ၆ နိုဝင်လာလ ဠဥူ ၄ဝ B္တ္က
၇ ဇူလိုင် အလင်းအိမ်စာစောင် (ဂျပန်) မှ ထုတ်ဝေသည်။
ကိုယ်တွေ့ပင်လုံ မဟာသေရေစည်သူ ဦးဖေမောင် နိုင်ငံဂုဏ်ရည် ပထမအဆင့်။ ရဲခေါင်မောင်မောင် မြန်မာပြန်သည်။
တိုင်းရင်းသားအရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ မူဝါဒများ ကြေညာချက်များ စာတမ်းများမှ ကောက်နုတ်ချက်များ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရ ဖက်ဒရယ်ရေးရာကော်မတီမှ ထုတ်ဝေဖြန့်ချီသည်။
ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (ပထမမူကြမ်း) ဖယ်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (မူကြမ်း) ရေးဆွဲရေးနှင့် ညှိနှိုင်းမှုကော်မတီ
ံငလ၊ ဗ၍ှီ လူ့အခွင့်အရေးအတွက် ရင်ဆိုင်ရပ်တည်ကြပါ။ - ကာတွန်းစာအုပ်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထားရှိသော သဘောထားများ ဗဟိုသတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာန အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (လွတ်မြောက်နယ်မြေ)
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲနှင့် တိုက်ပွဲဏ္ဍန်များ သုတေသနနှင့် မှတ်တမ်းတင်ဌာန (္ဒီ)
မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံသားများနှင့် နိုင်ငံခြားသားများ ပြဿနာ ခင်မောင်ကျော်
စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်လာနေသည့် မြန်မာပြည်၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပြဿနာများ မတ်၊ ၂ဝဝ၇ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကော်မတီ
ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ဖော်ဆောင်ရေးမှ စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်သစ်တည်ဆောင်ရေးဆီသို့ (အဟောင်း) ခွန်းမတ်ရ်ကိုဘန်
ဤ့နံသူပ Bငဘူန (ခသညအငေညငညါ အ့န ဥိူ ည္ဒေိနတ ဤနျအောနညအျ ဤမညျေူအေနိ ငညအသ Bကမာနျန်မသာ ဤ့န ဥမငါငညေူ ဤသညါကနျ)
ရွှေစည်းခုံစေတီတော်ကြီးသမိုင်း အရှင် အာဒိစ္စဝံသ
သမိုင်းဝင် ပုဂံစေတီပုထိုးများ ဦးသန်းဆွေ
၊ ဒါနအကျိုး ဦးထွန်းလှ
နှစ်ဆယ့်တစ်ရာစု ဒစ်ပလိုမေစီ ကျော်ဝင်း
အချိန်အခါအလိုက် ပြောင်းလဲနေသော ဂျီအိုပေါလစ်တစ် မကြင်ဌေး
သိပ္ပံနည်းကျ အစ္စလာမ့်အိမ်ထောင်မှုဆက်ဆံရေး ပြုစုသူ ဒေါက်တာအာဖ်သာဗ်အဟ်မဒ်ရှာဟ် (အေတာဝဟ်၊ ယူပီအိန္ဒိယ)
အတွေးအမြင် စာစဉ် (၁၆၁) ၂ဝဝ၃
၆ တိုက်မှာ လောက်ကိုင်တာခံဖူးသလား နှင့် အခြားထောင်ဝတ္ထုတိုများ ဝင်းတင့်ထွန်း
အဆိပ်သင့်ပန်းများ ပလောင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး (္စ္တဥ) မှ အစီအရင်ခံ ထုတ်ဝေဖြန့်ချီသည်။
ချင်းတွင်း မဂ္ဂဇင်း အမှတ် ၄ ဧပြီ ၂ဝဝ၆
အာဟာရ အမှတ် ၆၇ စက်တင်ဘာ ၁ဝ
အာဟာရ အမှတ် ၄၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၆ (၄) နှစ်ပြည့် အထူးထုတ်
အာဟာရ အမှတ် ၆၈ အောက်တိုဘာ ၁ ၂ဝဝ၆
အာဟာရ အမှတ် ၅၁ မေ ၈ ရက် ၂ဝဝ၅
အာဟာရ အမှတ် ၄၇ ဇန်နဝါရီ ၉
အာဟာရ အမှတ် ၅၅ စက်တင်ဘာ ၁၁
အာဟာရ အမှတ် ၆၅ ဇူလိုင် ၉
ခေတ်သစ်ကမBာအတွက် ပညာရေးနှင့် စာရီတ္တပျိုးထောင်မှု အောင်သင်း
ဖယ်ဒရယ်လေ့လာရေးစာစဉ် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (ဗBှီင်္)
ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးဝါဒမှသည် စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ဆီသို့ စာစဉ်အမှတ် - ၅
ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးဝါဒမှသည် စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ဆီသို့ စာစဉ်အမှတ် - ၃
ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးဝါဒမှသည် စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ဆီသို့ စာစဉ်အမှတ် - ၉
အခြေခံဥပဒေရေးရာ စာစောင် အမှတ် ၁၂ ၊ ဇန်နဝါရီ ၂ဝဝ၂ မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီ
ဤသစ နညါူငျ့ ဠသူ ၇ယ္ဒသ ၉ှနစအနာဘနမ ၁၉၉၉
ချင်းလဲန်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ မူကြမ်း (၄) ချင်းအမျိုးသားများစုရပ်
ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးဝါဒမှသည် စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ဆီသို့ စာစဉ်အမှတ် - ၄
ကလေးတို့အတွက် လက်ဆောင်မွန် (ကဗျာများ)
အခြေခံဥပဒေရေးရာ စာစောင် အမှတ် ၂၅ ၊ သြဂုတ် ၂ဝဝ၆ မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီ
အခြေခံဥပဒေရေးရာ စာစောင် အမှတ် ၂၆ ၊ ဒီဇင်လာ ၂ဝဝ၆ မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီ
၍ည်ူကထ ဠငမကျနျ (ဤ့န ၍ူနါ္နေူကျူငျာ ငည ဗမေုညေ)္ကှ့တန ဇညေ ညေီမ၏ ဗပနုပတေ
တော်လှန်ရေးအတွေ့အကြုံမျာှးေိုလ်တာရာ (ရဲဘော်သုံးကျိပ်)
၍ညိနစနညိနညခန ဠသူ ၁၈ယ္ဒသ ၁၉၂ီနခနာဘနမ ၂ဝဝ၁ှ၏ံ၏ဗ၏္ဒ
၍ညိနစနညိနညခန ဠသူ ၁၅ယ္ဒသ ၁ဲညေကမေပယ င်္နဘမကမေပ ၁၉၉၈ှ၏ံ၏ဗ၏္ဒ
၍ညိနစနညိနညခန ဠသူ ၁၇ယ္ဒသ ၃္နမေခ့ ၂ဝဝဝှ၏ံ၏ဗ၏္ဒ
၍ညိနစနညိနညခန ဠသူ ၁၈ယ္ဒသ ၁၈၈ ဗကါကျအ ၂ဝဝ၁ှ၏ံ၏ဗ၏္ဒ
၍ညိနစနညိနညခန ဠသူ ၁၈ယ္ဒသ ၁၉ဝ ဥခအသဘနမ ၂ဝဝ၁ှ၏ံ၏ဗ၏္ဒ
၍ညိနစနညိနညခန ဠသူ ၂၄ယ္ဒသ ၂၃၃္နပေ ၂ဝဝ၇ှ၏ံ၏ဗ၏္ဒ
၍ညိနစနညိနညခန ဠသူ ၂ဝယ္ဒသ ၂ဝ၆ ဗစမငူ-္နပေ ၂ဝဝ၃ှ၏ံ၏ဗ၏္ဒ
၍ညိနစနညိနညခန ဠသူ ၂၃ယ္ဒသ ၂၂၇ ဥခအသဘနမ ၂ဝဝ၆ှ၏ံ၏ဗ၏္ဒ
၍ညိနစနညိနညခန ဠသူ ၂၂ယ္ဒသ ၂၁၉ ဗစမငူ-္နပေ ၂ဝဝ၅ှ၏ံ၏ဗ၏္ဒ
၍ညိနစနညိနညခန ဠသူ ၂၃ယ္ဒသ ၂၂၈္ဒသလနာဘနမ ၂ဝဝ၆ှ၏ံ၏ဗ၏္ဒ
နိုင်ငံရေးအဘိဓာန်ံ္မ္ကီ ရ္ဒဃ္ကွB
ခွပ်ဒေါင်းတောင်ပံခတ်သံများနှင့် လေ့လာရေးစာစုများ - နိုဝင်လာ၊ ၂ဝဝ၆ င်္ီB သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးကော်မတီမှ ထုတ်ဝေဖြန့်ချီသည်။
အလုပ်သမားထုညီညွတ်ရေး မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်သောအလုပ်သမားများသမဂ္ဂများ မိတ်ဆက်
ရွှေဖီဦး ဤ့န္စေူကေည္တါသာနညဲသကမညေူ ၂ဝဝ၅ သြဂုတ်္စေူကေည္တါသာနညဒျ ဥမါညေငဖအေငသည
ပြဿနာအားချဉ်းကပ်ဖြေရှင်းခြင်း အမျိုးသားကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေးကော်မီတီ
ခြေလေးချောင်း တော်လှန်ရေး သခင်ဘသောင်း
ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း ခေါင်းနျင့်ပန်း ကျော်ဝင်း
မော်စီတုံး လက်ရွေးစင် စတုတ္ထတွဲ ၂ (စာအုပ်ငယ်- ပြည်တွင်းမှ)
ခေတ်မီဦးပေါ်ဦးလျှောက်ထုံမှ ပုံပြင် ဝတ္ထုများ - ဒုတိယတွဲ ဦးမြတ်လှပြုစုသည်။
္စသတနမ္စသငညအ ၂ဝဝ၃ ဗကည္နါပငညအ (္န၏န၏ယ ဗကျအမေူငေ)
နထခနူ ၂ဝဝ၃ ဠသူ -၂ ဗကည္နါပငညအ (္န၏န၏ယ ဗကျအမေူငေ)
နထခနူ ၂ဝဝ၃ ဠသူ -၁ ဗကည္နါပငညအ (္န၏န၏ယ ဗကျအမေူငေ)
္တငညိသတျ ဌစ ဗကည္နါပငညအ (္န၏န၏ယ ဗကျအမေူငေ)
္တငညိသတျ ဌစ ဠသူါ် ၂ ဗကည္နါပငညအ (္န၏န၏ယ ဗကျအမေူငေ)
္ကျငညီါဥှ ဗကည္နါပငညအ (္န၏န၏ယ ဗကျအမေူငေ)
ဗခနျ ၂ဝဝ၂ ဗကည္နါပငညအ (္န၏န၏ယ ဗကျအမေူငေ)
ဗိသဘန္စ့သအသျ့သစ ၇၏ဝ ဠသူါ် ၂ ဗကည္နါပငညအ (္န၏န၏ယ ဗကျအမေူငေ)
ဃသမနီူမတေ ၁၁ ဗကည္နါပငညအ (္န၏န၏ယ ဗကျအမေူငေ)
သက္ကရာဇ် ၂ဝဝဝ ကွန်ပျူတာပြဿနာ ၌၂ု
ကွန်ပျူတာအခြေခံသဘောနှင့် အသုံးပြုပုံ ဦးအောင်ဇော် (ကွန်ပျူတာ)
ခေတ်မီရေဒီယိုကက်ဆက်၊ အမ်ပလီဖိုင်ယာ အိုင်စီမှတ်တမ်းများ တတိယတွဲ ဦးသန်းမြင့် (နေလင်း အီလက်ထရွန်းနစ်)
ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးဝါဒမှသည် စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ဆီသို့ စာစဉ်အမှတ် - ၁
ပြင်ဆင်ရေးစာတမ်း (သို့) ဖက်ဒရယ်မူ
ကွန်ပျူတာဂျာနယ် ဇွန် ၂ဝဝ၁
ကွန်ရက်တွေ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ ဖိုးနိုင်ဝင်း
နည်းသစ် အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါ အသျှင်သုမန
ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးဝါဒမှသည် စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ဆီသို့ စာစဉ်အမှတ် - ၁ဝ
ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးဝါဒမှသည် စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ဆီသို့ စာစဉ်အမှတ် - ၇
ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးဝါဒမှသည် စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ဆီသို့ စာစဉ်အမှတ် - ၈
အနာဂတ် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ (မူကြမ်း) ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားကောင်စီ
သံကြီးတမန်ကြီး သံခင်းတမန်ခင်း ဒုတိယတွဲ ဦးအောင်သန့်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရန်ကုန်မြို့ ဂန္ဒီခန်းမကြေညာစာတမ်း ၁၉၉ဝ၊ ဇူလိုင် ၂၈၊ ၂၉
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီတပ်ပေါင်းစု (မ ဒ တ) ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ညီလာခံဗဟိုသဘာပတိအဖွဲ့ အရေးပေါ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (၂၈-၁၂-၈၇)မှ (၄-၁-၈၈)ထိ
သဘာဝမှသင်ခန်းစာများ (အပူပိုင်းဒေသ-ဆက်စပ်အကျိုးပြု စိုက်ပျိုးရေးလမ်းညွန်) ပြုစုသူ မူပိုင် မူရာကာမိ၊ ၁၉၉၁
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း ၁ဝ နှစ်မြောက်အထိမ်းအမှတ်
အမြဲစိမ်းသစ်တွောမနနည္ဒသလနာဘနမ ၃၂ မှ ထုတ်ဝေဖြန့်ချိသည်။
၍ညိနစနညိနညခန ဠသူ ၁၈ယ္ဒသ ၁၈၄ ဗစမငူ ၂ဝဝ၁
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဂျာနယ် အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၂ - အောက်တိုဘာလ ၁၉၉၈
ခေတ်သစ်သမိုင်းဂျာနယ် အမှတ်စဉ် ၁ လုမျိုးများသမိုင်းလေ့လာရေးစာစောင်
ကျန်းမာရေး စေတမာန် အမှတ် ၂၇ မတ် ၂ဝဝ၅
ကျန်းမာရေး စေတမာန် အမှတ် ၁၁ ဒီဇင်ဘာ ၂ဝဝဝ
ကျန်းမာရေး စေတမာန် အမှတ် ၅ ဧပြီ-မေ၊ ၁၉၉၇
ကျန်းမာရေး စေတမာန် အမှတ် ၁၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ဝဝ၂
ကျန်းမာရေး စေတမာန် အမှတ် ၄ ဇန်နဝါရီ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၁၉၉၇
ကျန်းမာရေး စေတမာန် အမှတ် ၁၈ နိုဝင်ဘာ ၂ဝဝ၂
ကျန်းမာရေး စေတမာန် အမှတ် ၂၂ ဒီဇင်ဘာ ၂ဝဝ၃
ကျန်းမာရေး စေတမာန် အမှတ် ၁၇ သြဂုတ်လ ၂ဝဝ၂
ကျန်းမာရေး စေတမာန် အမှတ် ၁၆ မေလ ၂ဝဝ၂
ကျန်းမာရေး စေတမာန် အမှတ် ၁၃ ဇွန်လ ၂ဝဝ၁
ကျန်းမာရေး စေတမာန် အမှတ် ၁၄ ဒီဇင်ဘာ ၂ဝဝ၁
ကျန်းမာရေး စေတမာန် အမှတ် ၂၅ စက်တင်ဘာ ၂ဝဝ၄
ကျန်းမာရေး စေတမာန် အမှတ် ၂၁ စက်တင်ဘာ ၂ဝဝ၃
ကျန်းမာရေး စေတမာန် အမှတ် ၃ဝ ဒီဇင်ဘာ ၂ဝဝ၅
ကျန်းမာရေး စေတမာန် အမှတ် ၂ဝ ဇွန်လ ၂ဝဝ၃
ကျန်းမာရေး စေတမာန် အမှတ် ၃၁ မတ် ၂ဝဝ၆
ကျန်းမာရေး စေတမာန် အမှတ် ၂၈၊ ဇွန် ၂ဝဝ၅
ကျန်းမာရေး စေတမာန် အမှတ် ၈ မတ် ၂ဝဝဝ
ကျန်းမာရေး စေတမာန် အမှတ် ၁ဝ စက်တင်ဘာ ၂ဝဝဝ
ကျန်းမာရေးနျင့်ပတ်သတ်သောသတင်း (မိတ္တူ) အာရေဂျံမှ ကူးထားသည်။
လွတ်မြောက်ရာလမ်း ၁၂ သွယ် မူယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု လုပ်ငန်းခွင်ဆွေးနွေးပွဲ
ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအတွက် မိသားစုစီမံကိန်းနည်းလမ်းများနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းဆိုင်ရာ လက်စွဲစာအုပ် ဃမေန
ဘလော့ဂါများနှင့် ဆိုက်ဘာအတိုက်အခံသမားများအတွက်လက်စွဲ မြန်မာ့သတင်းသမဂ္ဂ
တန်းမြင့်ကဗျာဖွဲ့နည်း ဦးဘိုးငွေ စီရင်ရေးသားသည်။
စကားပုံတစ်ရာ ပုံတစ်ရာ အတွဲ ၁ မန္တလေးဦးဝင်းလှိုင်
၊ ဒီမိုကရေစီဂျာနယ် အမှတ် ၂။ ၂ဝဝ၇ မေလ အလင်းတန်ဆောင် ဘာသာပြန်စာပေကွန်ယက်က ထုတ်ဝေသည်။
သဒ္ဒါအမြင်၊ စာအမြင် ဂုန် ဦးစန်းငွေ
အခြေခံဥပဒေရေးရာ စာစောင် အမှတ် ၈၊ ၂ဝဝဝ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီ
အခြေခံဥပဒေရေးရာ စာစောင် အမှတ် ၂ဝ၊ ၂ဝဝ၄၊ ဒီဇင်ဘာ မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီ
အခြေခံဥပဒေရေးရာ စာစောင် အမှတ် ၂ဝ၊ ၂ဝဝ၃၊ ဧပြီ မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီ
အခြေခံဥပဒေရေးရာ စာစောင် အမှတ် ၂၁၊ ဧပြီ ၂ဝဝ၅ မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီ
ရှေးဦးသူနာပြု - ၁၉၆၇ မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း
ရခိုင်လူငယ်မဂ္ဂဇင်း အ့န ဥလနမျနျေ ဗမေုညေ ၌သကအ့ ဗျသခငအေငသည
၊ ကြီးသုံးကြီးကိုလုပ်ကြံရန် ဟစ်တလာ၏အကြံ လင်းယုန်မောင်မောင်
ရွှေလမ်း ငွေလမ်း - မြန်မာအမေရိကန်ဆက်ဆံမှုမှတ်တမ်း ရေးသူ - ဦးညိုမြ။ အချက်အလက်ရှာဖွေပေးသူ ကျော်ညိမ်းလွင်
ဥဒါန်း မဂ္ဂဇင်း အမှတ် ၂ စက်တင်ဘာ ၂ဝဝ၄ မြန်မာသတင်းသမဂ္ဂ
ကမBာ့အကြောင်း တစေ့တစောင်း ပါရဂူ
ဒေါင်းအိုဝေ အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၂ ဇွန်လ ၁၉၉၇ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (ဗBှီင်္)
ဒေါင်းအိုဝေ အတွဲ ၂၊ အမှတ် ၅ ဧပြီ၊ မေ ၂ဝဝ၄ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (ဗBှီင်္)
ဒေါင်းအိုဝေ အတွဲ ၂၊ အမှတ် ၃ အောက်တိုဘာ၊ နိုဝင်ဘာ ၂ဝဝ၂ ၁၄ နှစ်မြောက်အထိမ်းအမှတ် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (ဗBှီင်္)
ဒေါင်းအိုဝေ အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၁ ဇန်နဝါရီ ဖေဖော်ဝါရီ မတ်၊ ၂ဝဝ၇ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (ဗBှီင်္)
လူထုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုနှင့် အသွင်ကူးပြောင်းရေး လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းဖွံ့ဖြိုးရေးသင်ရိုးညွန်းတန်း ၂ဝဝ၅ နဃီင်္
ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းကျော်ဇော် အတ္ထုပ္ပတ္တိ အပိုင်း - ၅ ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဇော
နှစ် ၄ဝ ပြည့်မြောက် တအောင်း(ပလောင်)အမျိုးသားတော်လှန်ရေးနေ့ အထူးထုတ်ဂျာနယ် ၁၂ ဇန်နဝါရီ ၂ဝဝ၃
၄၃ နှစ်မြောက် ပလောင်အမျိုးသားတော်လှန်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အထူးထုတ် မတ်လ ၂ဝဝ၆ ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး
မဟေသီရုံစုံ မဂ္ဂဇင်း အမှတ် ၂ဝ၂ အောက်တိုဘာ ၂ဝဝ၁
အသက်ရှင်နေလျက် ဘဝသေနေသူ ဆရာတော်ဦးဇောတိက (မဟာမြိုင်တော်ရ)
နိုင်ငံရေးသိပ္ပံမိတ်ဆက်္ကဤ့နငည ဥသ
သစ္စာ တော်လှန်ရေးစာပေမဂ္ဂဇင်း အမှတ် ၁၂ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ဝဝ၇
နွယ်နီ မဂ္ဂဇင်း အတွဲ ၁၄၊ အမှတ် ၂ဝဝ၄ ဖေဖော်ဝါရီ
မြန်မာ့ဓန စီးပွားရေး မဂ္ဂဇင်း အမှတ် ၁၆၁ ဒီဇင်ဘာ ၂ဝဝ၃
မြန်မာ့ဓန စီးပွားရေး မဂ္ဂဇင်း အမှတ် ၁၅၈ စက်တင်ဘာ ၂ဝဝ၃
၂၁ - စာစဉ် အမှတ် ၇ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ
ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးဝါဒမှသည် စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ဆီသို့ စာစဉ်အမှတ် - ၆
နွယ်နီ မဂ္ဂဇင်း အမှတ် ၇ ။ ဇူလိုင်လ ၁၉၉၅
၊ ဒီမိုကရေစီဂျာနယ် အမှတ် ၁။ အောက်တိုဘာ ၂ဝဝ၆ အလင်းတန်ဆောင် ဘာသာပြန်စာပေကွန်ယက်က ထုတ်ဝေသည်။
ကမBာ့နိုင်ငံများ အမှတ် ၂ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ
အခြေခံဥပဒေရေးရာ စာစောင် အမှတ် ၂၂၊ သြဂုတ် ၂ဝဝ၅ မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီ
အခြေခံဥပဒေရေးရာ စာစောင် အမှတ် ၂၃၊ ဒီဇင်ဘာ ၂ဝဝ၅ မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီ
အခြေခံဥပဒေရေးရာ စာစောင် အမှတ် ၇၊ ဧပြီ ၂ဝဝဝ မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီ
အခြေခံဥပဒေရေးရာ စာစောင် အမှတ် ၁၉၊ သြဂုတ် ၂ဝဝ၄ မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီ
အကောင်းဆုံးအင်္ဂလိပ်စာ အရှင်းလင်းဆုံး အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါ ပါရဂူ မင်းနန္ဒာ (ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်)
အင်္ဂလိပ်စကားပြောပြေါင်းချုပ်ကြီး ဆရာဦးစန်းလွင် B၏ှခ
ဆင်သင်္ချိုင်း ရှာပုံတော်နှင့် အခြားဝတ္ထုတိုများ ဖိုးကျော့
သစ္စာ တော်လှန်ရေးစာပေမဂ္ဂဇင်း အမှတ် ၇၊ နိုဝင်ဘာ ၂ဝဝ၅
ဂျပန်လူမျိုးတို့၏ လျှို့ဝှက်ချက်များ ညဏ်လင်းတင့်
သစ္စာ တော်လှန်ရေးစာပေမဂ္ဂဇင်း အမှတ် ၁ဝ၊ သြဂုတ် ၂ဝဝ၆
အာဏာရှင်သို့ ပေးစာများ အပိုင်း ၂ (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌဦးအောင်ရွှေမှ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေထံသို့ ပေးစာများ) မ က ဒ တ
အစားအစာများအကြောင်း္တနဗဠန အမျိုးသမီးရပိုင်ခွင့်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပညာရေးအဖွဲ့ မှ ပြုစုရေးသား ရိုက်နှိပ်ဖြန့်ဝေသည်။
ထင်ပေါ်ကျော်ကြား ကမBာ့ခေါင်းဆောင်များ ထွန်းသစ်
ဗုဒ္ဓြွဝါဒ ပေါ်ထွန်းခြင်း ဦးရွှေအောင်
မိုးမခ အနုပညာစာပေါင်းစု အမှတ် ၁။ ၂ဝဝဝ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရ
ဥတ္တမ ဂျာနယ် ၂ဝဝ၆ ၊ စက်တင်ဘာလ ၉ ရက် ၆၇ နှစ်မြောက်ဦးဥတ္တမနေ့အထိမ်းအမှတ် ထုတ်ဝေသည်။
သင့်ဘဝ ဇွန်လ ၂ဝဝဝ
ပြည်ဗမာနှင့် ဗိုလ်ချုပ်ရွာ ဤ္ဒဤ
လွတ်လပ်ရေး အရေးတော်ပုံမှတ်တမ်း ဗိုလ်သံတိုင်
အလင်းအိမ် စာစောင် အတွဲ ၁၊ အမှတ် - ၇
ပို့စ်မော်ဒန် လူမှုဗေဒ နှင့် ခေတ်သုံး နိုင်ငံရေးပညာ ဝေါဟာရအဘိဓာန် ပီဒီ ကျော်စွာ
နိုင်ငံများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ စိုးတင်ဝင်း (ဘဏ်)
၊ ဒုတိယအတွေး မောင်ဝံသ
၊ ဒီမိုကရေစီလေ့လာရေးစာစဉ် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (ဗBှီင်္)
မြန်မာနိုင်ငံကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုသမိုင်းအကျဉ်း အောင်စောဦး (မှိုင်းရာပြည့်)
င်္သမကာ ဂျာနယ် အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၃၊ မတ် ၂ဝဝ၇ င်္ီB
ရိုးမတံခွန် ဂျာနယ် အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၁ အောက်တိုဘာ ၂ဝဝ၅ ဗမေုည္ဒေအေငသညေူ ဃသကညခငူ
ရနံ့သစ် မဂ္ဂဇင်း အမှတ် ၇၁။ ၁၉၉၉
ရိုးမ ၃္ဒနတျ Bကူနအငည္ဒသ၏၇ီနခနာဘနမ ၂ဝဝဝ ရိုးမ ၃ သတင်းဌာန
တိုးတက်သောမွန်လူငယ်ဂျာနယ် ဠသူါ် ၇္ဒသလနာဘနမ ၂ဝဝ၄္နသည ၌သကအ့္စမသါမနျငလန ဥမါညေငဖအေငသည
တိုးတက်သောမွန်လူငယ်ဂျာနယ် ဠသူါ် ၄ ၂ဝဝ၃္နသည ၌သကအ့္စမသါမနျငလန ဥမါညေငဖအေငသည
တိုးတက်သောမွန်လူငယ်ဂျာနယ် ဠသူါ် ၁၁ှနစအနာဘနမ ၂ဝဝ၆္နသည ၌သကအ့္စမသါမနျငလန ဥမါညေငဖအေငသည
တိုးတက်သောမွန်လူငယ်ဂျာနယ် ဠသူါ် ၆ဲကညန ၂ဝဝ၄္နသည ၌သကအ့္စမသါမနျငလန ဥမါညေငဖအေငသည
တိုးတက်သောမွန်လူငယ်ဂျာနယ် ဠသူါ် ၄ီနခနာဘနမ ၂ဝဝ၃္နသည ၌သကအ့္စမသါမနျငလန ဥမါညေငဖအေငသည
ုနမညပောတေ ဠသူါ် ၁ယ ၍ျကန ၃ဲကညန ၂ဝဝ၂ုမေနညညင္ဒအေငသည္တေူသာနည ဥမါညေငဖအေငသည
လူ့ဘောင်သစ် အတွဲ-၁၊ အမှတ် - ၂ ဒီဇင်ဘာလ ၁၉၉၂ လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ပြန်ကြားရေးဌာန
အလင်းသစ်စာစဉ် အမှတ် ၄ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (ဗဟို)၊ ပါတီရေးရာဌာန
ှဗမာပ္ဒနတ္ဒသူ၏ ၁ယ္ဒသ၏ ၅ယ္နမေခ့ယ ၁၉၉၉ှဗ
ရွှေခမောင် မှတ်တမ်းလွှာ အတွဲ ၄ အမှတ် ၉ ၁၉၉၈ မတ်လ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (လွတ်မြောက်နယ်မြေ)
ရွှေခမောင် မှတ်တမ်းလွှာ အတွဲ ၄ အမှတ် ၁ဝ ၁၉၉၈ စက်တင်ဘာလ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (လွတ်မြောက်နယ်မြေ)
မွန်အမျိုးသမီးဂျာနယ် အတွဲ ၃ အမှတ် ၁ ၁၉၉၈ ဖေဖော်ဝါရီလ မွန်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး (မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (ဗဟို) )
မွန်အမျိုးသမီးဂျာနယ် အတွဲ ၂ အမှတ် ၁ ၁၉၉၁ သြဂုတ်လ မွန်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး (မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (ဗဟို) )
လူတိုင်းသိမှတ်စရာ အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါ မယ်တော်ဆေးခန်း
မရည်ရွယ်ဘဲ ကိုယ်ဝန်ရရှိခြင်း မယ်တော်ဆေးခန်း
သဘာဝပေးသည့် မိခင်နို့ရည်တိုက်ကျွေးခြင်း္တနဗဠန္တသာနညဒျ နိကခအေငသည်သမ ဗိလညေခနာနညအ ညေိ နာစသတနမာနညအ
ကျွန်တော့်လိုမဖြစ်အောင် အဖော်လေးကို အမြဲဆောင်
ခုခံအားကျဆင်းမှုကးစက်ရောဂါ (အေအိုင်ဒီအက်စ်) လူနာတစ်ဦးအား အိမ်တွင်ပြုစုနေရသော မိသားစုများအတွက် ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးလမ်းညွန် ခုခံအားကျဆင်းမှုကူးစက်ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့် တိုက်ဖျက်ရေးစီမံချက် ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန
အဖြစ်များသော ရောဂါများအကြောင်း ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံးကျန်းမာရေးနှင့် ပညာပေးရေးအစီအစဉ်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးနှောင့်ယှက်ခြင်းဆိုသည်မှာ မြန်မာ့အမျိုးသမီးများ သမဂ္ဂ (B္တ္က)
ဇလပ်ပန်းတို့ လန်းရာမြေ (ချင်းပြည်) ဠသူ၏ ၁ ဆလိုင်း ဆဲဆဲ
အောင်ဆန်း ဂျာနယ် ဇန်နဝါရီလ၊ ၂ဝဝ၆
မြန်မာနိုင်ငံကျောင်းသားလူငယ်များကွန်ဂရက် စာစောင် အမှတ် ၃ ၃၁၊ ဇူလိုင်၊ ၂ဝဝ၅
္စေူကေညါ ၌သကအဲ့သကမညေူ အတွဲ ၁ အမှတ် ၁ ဧပြီလ ၂ဝဝ၂ ပလောင်လူငယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့
နွေဦးအိုးဝေ စာစောင် ၂ဝဝ၄ အောက်တိုဘာလ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (လွတ်မြောက်နယ်မြေ) - (လူငယ်)
အောင်ဆန်း ဂျာနယ် နိုဝင်ဘာ ၂ဝဝ၄
အောင်ဆန်း ဂျာနယ် စက်တင်ဘာလ၊ ၂ဝဝ၅
ရွှေဖီဦး အတွဲ ၂၊ အမှတ် ၁၊ ၂ဝဝ၃ ဇူလိုင် ပလောင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး
လူ့ဘောင်သစ် ၂ဝဝ၇ ဇန်နဝါရီလ
ဗမာပြည် ခရီးသည်လမ်းညွှန် Bကမာေ ဗခအငသညွမသကစ
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး္ဒု္က နှင့် နဝတအကြား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနှင့် ပတ်သတ်၍္ဒု္က ၏ ရှင်းလင်းချက်စာတမ်း ၁၉၉၇ ဇူလိုင်လ ၁၉ ဗဟိုစည်းရုံးရေးနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာန
ဒေသဆိုင်ခေါင်းဆောင်မျေားအတွက် လူမှုဆက်သွယ်ရေး အမျိုးသားကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေးကော်မီတီ
ဆွေးနွေးပွဲများနှင့် ကော်မတီများ အမျိုးသားကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေးကော်မီတီ
ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စီမံကွပ်ကွဲမှု အမျိုးသားကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေးကော်မီတီ
လူထုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အမျိုးသားနိုင်ငံ အမျိုးသားကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေးကော်မီတီ
ကျောင်းပညာရေးသုတေသန ဂျာနယ် အမှတ် ၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ဝဝ၇ အမျိုးသားကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေးကော်မီတီ
တိုင်းရင်းသားတို့၏ တူညီသောရိုးရာဓလေ့ထုံးစံများ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ
ဘဝအဘိဓမ္မာ (ရေဒီယိုပြဇာတ်ပေါင်းချုပ်) မောသီရိ
အခန်း ၁၃ ဖယ်ဒရယ်မူအစစ် (မိတ္တူ)
ချုံကြားမှ ဘုံဖျားသို့ ဖေမြင့်
အတွေးအမြင် စာစဉ် (၁၆၅) ၂ဝဝ၄
ဖြောင့်သောမြား သို့မဟုတ် ယောက်ျားကောင်းဟူသည် ဦးဝမ်ထိန်
ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးရဲ့နှလုံးသား ၊ ကြည်မင်း
၊ ဒီမိုကရေစီလေ့လာရေး ဂျာနယ် အမှတ် ၂ ၂ဝဝ၇၊ မတ် လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ သုတေသနနှင့် လေ့လာရေးဌာနက ထုတ်ဝေသည်။
ရန်သူနှင့် စကားပြောခြင်း- မင်ဒဲလား ဂါမဏိ ဘာသာပြန်ဆိုသည်။
ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ (ရာဇသတ်ကြီး) အဘိဓာန် ဦးကျော်ဇေယျ
တရုတ်အတွက် ရွေးစရာ (မြန်မာပြည်မြောက်ဖျား သစ်တောများဖျက်ဆီးမှုအဆုံးသတ်ရေး)ွူသဘ္တေူငအညနျ
အကျိုးစီးပွားများ၏ ပဋပက္ခ (မြန်မာ့သစ်တောများ၏္မသေချာသောအနာဂတ်)ွူသဘ္တေူငအညနျ
သီးညှပ်စိုက်ပျိုးခြင်း (ခြောက်သွေ့ရပ်ဝန်းစိုက်ပျိုးရေး လက်တွေ့လမ်းညွန် အမှတ် ၃)
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူ့အခွင့်အရေးဟူသမျှဆုံးရှုံးခဲ့ရသော ကူကီးလူမျိုးများ
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးနှင့် ၁၉၄၇ အခြေခံဥပဒေ ပထမတွဲ
လူထုစည်းရုံးရေးလမ်းညွန် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (ဗBှီင်္)
မော်စီတုံး လက်ရွေးစင် အတွဲ ၃ (ဒုတိယအုပ်) နိုင်ငံခြားစာပေထုတ်ဝေရေးဌာန ပီကင်း ၁၉၆၇
မော်စီတုံး လက်ရွေးစင် အတွဲ ၄ (ပထမအုပ်) နိုင်ငံခြားစာပေထုတ်ဝေရေးဌာန ပီကင်း ၁၉၆၇
မော်စီတုံး လက်ရွေးစင် အတွဲ ၄ (ဒုတိယအုပ်) နိုင်ငံခြားစာပေထုတ်ဝေရေးဌာန ပီကင်း ၁၉၆၇
မော်စီတုံး လက်ရွေးစင် အတွဲ ၁ (ပထမအုပ်) နိုင်ငံခြားစာပေထုတ်ဝေရေးဌာန ပီကင်း ၁၉၆၇
မော်စီတုံး လက်ရွေးစင် အတွဲ ၂ (ပထမအုပ်) နိုင်ငံခြားစာပေထုတ်ဝေရေးဌာန ပီကင်း ၁၉၆၇
ကိုယ်တိုင်ရေး အတ္ထုပ္ပတ္တိ ပေါင်းချုပ် (ဆိုင်းစုမှသည် မန်ဟိုင်းဆီသို့) ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းကျော်ဇော
မှတ်သားမိသော စကားများ ဒေါက်တာမတင်ဝင်း (ပညာရေးတက္ကသိုလ်)
ရေဆန်လမ်းသို့အပြန် နိုင်ဝင်းဆွေ အမှတ်တရ ကဗျာများ
ကျန်းမာရေးနှင့် ဆေးပညာ (အသံလွင့်ဟောပြောချက်များ) အမှတ်-၁ ဗဟိုကျန်းမာရေးပညာဌာန (ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန)
၁ဝ ရက်အတွင်း ရေကူးတတ်နည်း တိမ်မိုးလှိုင်
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ၏ သဘောထားနှင့် အကြံပြုချက်များ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်သောသတင်းအင်ဂျင်စီ
ဝံလက်ရဲ့အားမာန်နှင့် အခြားကဗျာများ ခိုင်လင်း (မေဃဝတီ)
ဂျိမ်းဂွိုက်(စ်)၏ ဝတ္ထုများ မြသန်းတင့်၊ နိုင်ဇော်၊ ဘုန်းမြင့် (မန္တလေး)၊ ကောင်းသာ၊ လင်းဝေမြိုင်၊ ဂျူးနှင့် မြတ်သစ်
နိုင်ငံရေးသမားနှင့် နိုင်ငံရေး တင်မောင်ဝင်း
ခေါင်းဆောင်ကမBာ ရုပ်ပုံလွင် ထွန်းသစ်
ကမBာကျော်စာအုပ် ၁ဝဝ နွယ်သစ်
မိုးမခ အနုပညာစာပေါင်းစု မတ်၊ ဧပြီ ၂ဝဝဝ
၊ ကြွယ်ဝချမ်းသာစေသော အကြောင်းတရားများ ပထမအပိုင်း ၁ အောင်ဝင်း(စိတ်ပညာ) မြန်မာပြန်
၊ ဒီမိုကရေစီ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်များ
ဓမ္မသစ်ကျမ်းနှင့် ဆာလံကျမ်း၊ သုတ္တံကျမ်း၊
လေကိုဆန်၍ (အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုးရှိနေသော မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ၏ ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်များ) ဒေါက်တာသီဟမောင်မောင်၊ ခိုင်မာကျော်ဇော
နာတာရှည်ကပ်ဆိုး (မြန်မာပြည်အရှေ့ပိုင်း ကျန်းမာရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေး) နယ်လှည့်ကျောပိုးအိတ်ကျန်းမာရေးလုပ်သားအဖွဲ့၏္စစ်တမ်းအစီအရင်ခံစာ
နဒီ အမျိုးသမီးရေးရာစာစောင် အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၂ ၂ဝဝ၂ ဒီဇင်ဘာလ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (လွတ်မြောက်နယ်မြေ) ဗဟိုအမျိုးသမီးလုပ်ငန်းအဖွဲ့
လူ့အခွင့်အရေးအရေခြုံ ရိုဟင်ဂျာ အမည်ခံ စစ်တကောင်းအနွယ်ဝင် ဘင်္ဂါလီတို့၏ နယ်သစ်ချဲ့ထွင်ရေးသမိုင်းလိမ်ကို ဝေဖန်ခြင်း ရခိုင်အမျိုးသားအသင်း (ဂျပန်)
၊ ဒုက္ခသည်များ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး - အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ (္ဒွဥျ) အတွက် လက်တွေ့လမ်းညွန်ချက်္က္ဒံဃ္မ ည္ဒေွိဥ စမေအညနမျ
အရှေ့ပိုးကရင် မန်းသင့်နောင် (ကော့ကရိတ်)
မင်းပြားတခွင့် ကျိန်းတော်ရှင် အသျှင်စက္ကိန္ဒ၊ အသျှင်ဝါသဝ
ပင်လယ်မှာ ပျောက်ဆုံးသွားသောအရာ သုခမိန်လှိုင်
မြန်မာနိုင်ငံမှ အမျိုးသမီးများ၏အသံ - မြန်မာဘာသာ သနပ်ခါးအဖွဲ့မှ စီစဉ်တည်းဖြတ်သည်။
ရခိုင့်တန်ဆောင် မဂ္ဂဇင်း အမှတ် ၁၈ ၁၉၉၅ ရခိုင်စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီ (တက္ကသိုလ်များ-ရန်ကုန်)
လောကသာရ ပျို့အဖြေ အဘိဓာန် မင်းသုဝဏ် တည်းဖြတ်သည်။
စကားပြေသဘောတရား စကားပြေအတတ်ပညာ မောင်ခင်မင် (ဓနုဖြူ)
ကျော်စွာ ၁ဝဝ ပထမတွဲ ဒေါက်တာသန်းထွန်း
ဆာမူရိုင်း လေးယောက် ဟန်ထွန်း
အင်္ဂလိပ်နှင့် ကုလားစကားပြောနည်းကျမ်း ဆရာဖြိုး - ဘီ-အေ၊ တီ-ပီ-အက်စ်
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဂျာနယ် အမှတ် ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂ဝဝဝ္က္ဒ္စီ (ဤံန္က္ဒ၍ဤန္ဒီဗဤ၍ဥ္ဒဗူ၍ဤ၍နှဒီန္နဥဃ္မဗဤ၍ဃ ဃဥ္ဒ္မွနှ)
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားကောင်စီ သတ္တမအကြိမ်ညီလာခံသို့ တင်သွင်းသောနိုင်ငံရေးအစီအရင်ခံစာ ၂ဝဝ၄ မေ ၂
မေခလာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၁၊ အတွဲ ၁ ဇူလိုင် ၂ဝဝ၄ နယ်စပ်ဒေသရောက် တိုင်းရင်းသား အမျိုးသမီးများ ကယ်ဆယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့မှ ထုတ်ဝေဖြန့်ချီသည်။
ရခိုင်ညွန့်ဖူး အမှတ် ၃
ရခိုင်ကြေးမုံ မဂ္ဂဇင်း အမှတ် ၂ ၁၉၉၅
အင်အားစုစည်းခြင်း - မြန်မာနိုင်ငံမှ အမျိုးသမီးများ မိမိတို့အခွင့်အရေးများနှင့်ပတ်သတ်၍ ပြောဆိုချက်များ ဘရင်ဒါ ဘီလတ် ၍ာေါနျ ဗျငေ
လူ့ဘောင်သစ် ဂျာနယ် အမှတ် ၁၊ ၂ဝဝ၇ ဇွန်လ ပြန်ကြားရေးဌာန (လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ - ဗဟိုဌာနချုပ်)
္စေူကေည္တါသာနညဒျဲသကမညေူ ဠသူ ၁ယ ၍ျကန ၂ယ ဗကါကျအ ၂ဝဝ၂္စေူကေည္တါသာနညဒျ ဥမါညေငဖအေငသည
စွယ်စုံကျော်ထင်ကျမ်း ရွှေတောင်မြို့ ကျီးသဲလေးထပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး
ဃသာစကအနမ္နေါဖေငညန္ဒသ၏၁ယ္နပေ ၂ဝဝ၇
အမှောင်ကြားက ဗမာပြည် ဝင်းတင့်ထွန်း
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုမှတ်တမ်း တက္ကသိုလ် နေဝင်း
စာပေရေးရာ ဆောင်းပါးများ မောင်ထင်
ရခိုင်ရိုးမမှာ ဘဝတကွေ့ ၊ ကြာဦးဖြူ
မြစိမ်းတောကြော နဂါးငွေ့ အောင်ငြိမ်း
ဟစ်တလာ၏ အမာခံလက်ရုံး ဒေါက်တာဂိုးဘဲလ် မောင်သိန်းအောင် (နိုင်ငံခြားငွေကြေး)
မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီ-၁ဝ နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ်စာစောင် - ၂ဝဝ၄ အောက်တိုဘာ ၂ဝ
အလုပ်သမားကာကွယ်ရေးအက်ဥပဒေ ဘီအီး ၂၅၄၁ (၁၉၉၈) ချာန်ဒလာနှင့်ထုန်င်-အက်
တော်လှန်သူတို့နှင့်အတူ နှင့် အခြားကဗျာများ ရဲကျော်သူ
ဂျပန်ခေတ်စစ်တက္ကသိုလ်နှင့် ဗြိတိန်ဆင်းဟတ်စ်ဘုရင့်စစ်တက္ကသိုလ်ုတိယဗိုလ်မှူးကြီး သောင်းထိုက် (အငြိမ်းစား)
ဗန်းမော်တင်အောင် တိုင်းပြုပြည်ပြု စာရေးဆရာ သတင်းစာဆရာ ပြည်သူ့ဘက်တော်သားများ
မြောက်ပြန်လေ - နှောင်ကြိုးမဲ့စာစု ဒီဇင်ဘာ ၁၉၉၂ ၍မမတေေိပ္စကဘူငျ့ငညွါမသကစ
မချစ်မနှစ်သက်သူတို့၏ မီးတောက် ညိုထက် (လမ်းသစ်ဦး)
လူ့ဘောင်သစ် ဂျာနယ် အတွဲ ၄ အမှတ် ၂၊ ဇန်နဝါရီ ၂ဝဝဝ လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဗဟိုပြန်ကြားရေးဌာနက ထုတ်ဝေသည်။
ကိုယ်စိတ်ကျန်းမာဘဝတာ (အိပ်ခ်အိုင်ဗွီ၊ အေအိုင်ဒီအက်စ်ကာကွယ်တာဆီးရေးကျောင်းသင်ခန်းစာများ) မူလတန်းအဆင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန- အခြေခံပညာဦးစီးဌာနယူနီဆက်ဖ်
ကရင်အမျိုးသားသတင်းစာစောင် အတွဲ ၈၊ အမှတ် ၇ စက်တင်ဘာလ ၂ဝဝ၄
လူ့ဘောင်သစ်ဂျာနယ် အတွဲ ၈၊ အမှတ် ၁ အောက်တိုဘာလ ၂ဝဝ၃ လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ပြန်ကြားရေးဌာန
ရဟန်းပျိုး ဂျာနယ် အတွဲ ၅၊ အမှတ် ၁ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ဝဝ၆ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရဟန်းပျိုးသမဂ္ဂ (ဗဟို) ပြန်ကြားရေးဌာနမှ ထုတ်ဝေသည်။
ရဟန်းပျိုး ဂျာနယ် အတွဲ ၅၊ အမှတ် ၂ စက်တင်ဘာလ ၂ဝဝ၆ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရဟန်းပျိုးသမဂ္ဂ (ဗဟို) ပြန်ကြားရေးဌာနမှ ထုတ်ဝေသည်။
ရဟန်းပျိုး ဂျာနယ် အတွဲ ၃၊ အမှတ် ၃ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၉၉ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရဟန်းပျိုးသမဂ္ဂ (ဗဟို) ပြန်ကြားရေးဌာနမှ ထုတ်ဝေသည်။
ရဟန်းပျိုး ဂျာနယ် အတွဲ ၄၊ အမှတ် ၁ ဇူလိုင်လ ၂ဝဝ၁ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရဟန်းပျိုးသမဂ္ဂ (ဗဟို) ပြန်ကြားရေးဌာနမှ ထုတ်ဝေသည်။
္စေ-ဥ ၌သကအ့ ဥမါညေငဖအေငသည္ဒသ၏၂၊္ဒသလ ၂ဝဝ၁
သင့်ရဲဘော် ဂျာနယ် အတွဲ ၁ အမှတ် ၁။ မေ ၁ ၂ဝဝ၅ မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားသွေးစည်းညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ (Bှူဥ)
မြန်မာ-ယိုးဒယားဆက်ဆံရေး (အခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့်) အခြေခံပညာသင်ရိုးညွန်းတမ်း၊ သင်ရိုးမာတိကာနှင့် ကျောင်းသုံးစာအုပ်ကော်မတီ
မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုသမိုင်း ခိုင်စိုးနိုင်အောင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီတပ်ပေါင်းစု
စာသင်ခန်းအတွင်းက ကမBာကြီး ဒီမိုကရေစီ ဆရာသိန်းနိုင်
ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးဝါဒမှသည် စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ဆီသို့ စာစဉ်အမှတ် - ၂
အတွေးအမြင် စာစဉ် (၁၆၄) ၂ဝဝ၃
သလုံးတော်ဓာတ်သမိုင်းနှင့် စစ်တွေမြို့သမိုင်း အသျှင်စက္ကိန္ဒ
ီမိုကရေစီ မေးခွန်း ၈ဝ နျင့်အဖြေများ
ပိတောက်စည်သံ ဂျာနယ် အတွဲ ၁ အမှတ် ၄။ ၂၁ ဧပြီ ၂ဝဝ၃
မဇ္ဈိမ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် အတွဲ ၅ အမှတ် ၄
မော်စီတုံး လက်ရွေးစင် စတုတ္ထတွဲ ၁ (စာအုပ်ငယ်- ပြည်တွင်းမှ)
င်္သမကာ ဂျာနယ် အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၂၊ ဒီဇင်ဘာ ၂ဝဝ၆
မိုးဂျာနယ် အမှတ် ၂ မေလ ၂ဝဝ၆
ဒေါင်းအိုးဝေ အတွဲ ၂ အမှတ် ၇ နိုဝင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (ဗBှီင်္)
လက်ဇပ်ကားနှင့် သံလွင်ပင် မောင်စူးစမ်း
ခေတ်ပြိုင်ဂျာနယ် အမှတ် ၁၇၄ စက်တင်ဘာ ၂ဝဝ၇
စနစ်တကျပြင်ဆင်ခြင်း - စွမ်းရည်တည်ဆောက်ရေးအတွက် လက်တွေ့လမ်းညွန် စွမ်းဆောင်နိုင်မှုမြင့်မားလာရေးအတွက် အမျိုးသမီးများအား ပညာပေးရေးအဖွဲ့္တနဗဠန
မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစု အီးဘူလန်တင် အမှတ် ၃၃ ၂ဝဝ၇ သြဂုတ် ၂ဝဝ၇
လွတ်မြောက်ရေးစာစောင် အမှတ် ၁ဝ၁ စက်တင်ဘာ ၂ဝဝ၇
စံပယ်ဖြူ မဂ္ဂဇင်း အမှတ် ၇ နိုဝင်ဘာ ၂ဝဝ၆
ူငလငညါ ဃသူသကမ အမှတ် ၁ဝဝ အောက်တိုဘာ ၂ဝဝ၃
ပြည်သူ့တပ်မတော်သန့်ရှင်းရေးနှင့် အာဏာအလွဲသုံးစားသူများ၏ အတွင်းရေးအဖြစ်မှန်များ အဝေးရောက်သံတမန်တစ်ဦး
ဝိဘတ်နှင့် တွဲ၍ အင်္ဂလိပ်စာအစုံးအနှုန်းများ ဗ အသ ဇ စိုးမြိုင်
နိုင်ငံတကာအတွေး နိုင်ငံတကာအမြင် မောင်ဝံသ
မုနိမြေ မဂ္ဂဇင်း အမှတ် ၅
ရခိုင်သဟာယအသင်း အမှတ် ၄
ခေတ်ပြိုင်ဂျာနယ် အမှတ် ၁၆၉ ဇါန် ၂ဝဝ၇
ကွန်ပျူတာ ဂျာနယ် ဧပြီ ၁၉၉၇
ကွန်ပျူတာ ဂျာနယ် ဧပြီ ၁၉၉၆
ဤ့န္တလေနျ ၃၊ဝ၇၏္နမေခ့ ၂ဝဝ၇
လီကွမ်ယူ၏ လီကွမ်ယူ ထက်မြက်
ဖက်ဒရယ်ဆရာအတတ်ပညာသင်တန်းကျောင်း င်္၍ဤန-Bကမာေ (္ဒံနဃ)
စစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်မှု၏မျက်နှာဖုံး လှိုင်သင်း (ဘာသာပြန်သည်)
ကွန်မြူနစ်ဝါဒ၏မူများ ဖယ်ဒရယ် အိန်ဂျယ်လ်
အစဉ်အလာကောင်း ၂ဝဝ၇ အောက်တိုဘာ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုသုတေသနဌာန
ခေတ်ပြိုင် အမှတ် ၁၇၄ နိုဝင်ဘာ
လူတိုင်းအတွက် အင်္ဂလိပ်စာ ဆရာဦးအောင်သိန်းဟန်
အာဏာရှင်သို့ ပေးစာများ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (လွတ်မြောက်နယ်မြေ)
အိုင်အယ်လ်အို စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် အမျိုးသမီးအလုပ်သမားများ မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်
လူ့အခွင့်အရေး ဆွေးနွေးခန်း - ဆောင်းပါးများ ဒေါက်တာအောင်ခင်
ရခိုင့်အားမာန်စာစောင့် အမှတ် ၂
သွေးစည်းခိုင်မာရေးဂျာနယ် အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၃ ၁၉၉၉ ဇွန်လ
လူ့အခွင့်အရေး အတွေးအခေါ်အခြေခံများမှ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများကို ချဉ်းကပ်လေ့လာခြင်း ဦးအောင်ထူး
သစ္စာ တော်လှန်ရေးစာပေမဂ္ဂဇင်း အမှတ် ၁၁ နိုဝင်ဘာလ ၂ဝဝ၆
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာ ဂျာနယ် အတွဲ ၂ အမှတ် ၁
မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီရေးရာ လှုပ်ရှားမှု ဆောင်းပါးများ အရှင်ခေမာစာရ (ရဟန်းပျိုသမဂ္ဂ)
နျပျေ ညေိူနအအနမျ ဆရာဦးဥာဏ်လင်း
ကရင်နီလူမှုအဆောက်အအုံ၏ မိရိုးဖလာအယူအဆနှင့် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ထဲဘူးဖဲ
၊ ဒိုင်ယာလော့ အောင်နိုင်ဦး
မြန်မာဖတ်စာ - ဒုတိယတန်း ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
ရခိုင်သမိုင်းကွင်းဆက်များကို ဆက်စပ်ကြည့်ခြင်း အောင်သူရကျော် (ရက္ခိုင်)
မြောက်ဦးမြို့ထင်ရှားသောဘုရားသမိုင်း ရခိုင်လှမြင့် စီစဉ်သည်။
ဘာသာကြီးလေးခု အနှစ်သာရများ ညိုသောင်း
မုနီမြေ မဂ္ဂဇင်း အမှတ် ၅
နိုင်ငံရေးပညာ ပေါင်းတည်- စန်းအောင်
အတွေးအမြင် စာစဉ် (၁၆၃) ၂ဝဝ၃
၊ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးများကို အကြွင်းမဲ့လုံးဝဖျက်သိမ်းထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အကျဉ်းထောင်စနစ် အောင်စောဦး
နဂါးကိုးကောင်ဒေဝီနှင့် ဂမBီရဝတ္ထုတိုများ ရီရီဌေး
ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ (မူကြမ်း) ဖွင့်ဆိုချက် အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးကော်မတီ (ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားကောင်စီ)
ရက္ခပူရ ဗုဒ္ဓြွသာသနာအလင်းရောင် ရက္ခပူရ ဗုဒ္ဓြွသာသနဝေပုလ္လအသင်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူ့အခွင့်အရေးဟူသမျှဆုံးရှုံးခဲ့ရသော ကူကီးလူမျိုးများ ကူကီးကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး
နေရောင်ခြည်ကိုရှာဖွေခြင်း ဖင်း(မ်) ကို(ဒ်)ဆဝမ်
ဖိနပ်ခြောက်ရန် ဆောင်ရွက်နည်း မြတ်ငြိမ်း
လူမှုအခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ကမBာ့အဓိဌာန်ပြု ကျေညာစာတမ်း Bကမာ္မေငါ့အ္နျသလနာနညအ်သမ ဗခအငသည (B၏္က၏္မ၏္န၏ဗ)
လူ့အခွင့်အရေးဝေါဟာရများ လူအခွင့်အရေးပညာပေးဌာန (မြန်မာနိုင်ငံ)
လူ့အခွင့်အရေး မေးခွန်းနှင့် အဖြေများ လူအခွင့်အရေးပညာပေးဌာန (မြန်မာနိုင်ငံ)
ကမBာ့နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ်များသမိုင်း (ပထမတွဲ နှင့် ဒုတိယတွဲ) မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ကြော်ငြာအတတ်ပညာ လူထုစိန်ဝင်း
ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပဋိပက္ခဆိုရာ လေ့လာချက်အချို့ ထွန်းထွန်းသန်း (လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ) ပြုစုတင်ပြသည်။
ပဋိပက္ခနှိုင်းယှသ်လေ့လာမှုစာတမ်း (ရုရှား-ချေချင်းညာ နှင့် အင်ဒိုနီးရှား-အရှေ့တီမော) စိုးမိုး (ထွန်းထွန်းသန်း)
အရင်ဧကရာဇ် အခုလူ ဒေါက်တာသန်းထွန်း
လူ့အခွင့်အရေး လက်စွဲ လူအခွင့်အရေးပညာပေးဌာန (မြန်မာနိုင်ငံ)
မိုးလုံးပြည့်မုသာဝါဒများ ဘီဘီစီ၊ ဗွီအိုအေ၊ အေအိုင်အာရ်
ဃငလငှူသခငနအပ နှင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းအကြား ဆက်စပ်မှုများကို စူးစမ်းရှာဖွေခြင်း ဓမ္မါဝဘ့်ဘာ
မြန်မာပြည်ရွေးကောက်ပွဲများနှင့် ပြည်သူတို့၏ နိုင်ငံရေးအရ ပါဝင်မှု သုတေသနနှင့် မှတ်တမ်းတင်ဌာန (္ဒီ)
ရှေးမပျက် ခေတ်သစ်လူ့ဘောင် ကလောချစ်ထွန်း (ဘာသာပြန်ဆိုသည်)
အာဏာရှင်သို့ပေးစာများ အပိုင်း ၂ သုတေသနဌာနခွဲ မကဒတ
နိုင်ငံတော်ကိုလုပ်ကြံသော ဒီမိုကရေစီတစ္ဆြေွများနှင့် လက်ရွေးစင်ဆောင်းပါးများ
အမှတ်စဉ် (၆) ၁၉၉၉ ခုနှစ် အောင်တိုဘာ အခြေခံဥပဒေရေးရာစာစောင်
အမှတ်စဉ် (၁၃) ၂ဝဝ၂ ဧပြီ အခြေခံဥပဒေရေးရာစာစောင်
၊ ဒီမိုကရေစီစာစောင်၂ဝဝ၆ ခုနှစ်အောင်တိုဘာလ၊ အမှတ် (၁)
၁၉၉၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၆ရက် အစီရင်ခံစာ ပြည်သူ့လွတ်တော်ကော်မတီ
သမိုင်းသစ်ဂျာနယ် အတွဲ (၂)
နိုင်ငံရေး စာတမ်းများ ဗဟိုကော်မတီ (၁၉-၉-၁၉၉ဝ) မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး
သစ္စာ တော်လှန်ရေးစာပေမဂ္ဂဇင်း အမှတ် ၆ သြဂုတ်လ ၂ဝဝ၅
စံပယ်ဖြူ မဂ္ဂဇင်း အမှတ် ၉ စက်တင်ဘာ၊ ၂ဝဝ၃
ကမBာ့သမိုင်း၏ မှတ်တိုင်များ တတိယတွဲ
ကမBာ့ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက် အမှတ် (၁၃၂၅) အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ)
ကမBာ့နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ်များသမိုင်း (ဒုတိယတွဲ) မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ
မြန်မာ့ဓန အမှတ် ၁၄၆၊ စက်တင်ဘာ၊ ၂ဝဝ၂
နိုင်ငံရေးအရသတ်၍မသေနိုင်သည့်ပါလက်စတိုင်းများ သန်းအေး မြန်မာပြန်သည်။
ဦးနှောက်များကို မီးညှိခြင်း ဘိုးလှိုင်
ကမBာ့သမိုင်း၏ မှတ်တိုင်များ ပထမတွဲ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ
မြန်မာ့ အလယ်တန်းနျင့်အထက်တန်းကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအတွက် ဒီမိုကရေစီလက်စွဲ မြန်မာနိုင်ငံအကြမ်းမဖက်လှုပ်ရှားမှုကော်မတီ
ရနံ့သစ် မဂ္ဂဇင်း အမှတ် ၆၉၊ ၁၉၉၉ ဖေဖော်ဝါရီ
စံပယ်ဖြူ မဂ္ဂဇင်း အမှတ် အမှတ် ၂ မတ်လ ၂ဝဝ၆
လူထုအဓိကလူ့အဖွဲ့အစည်း (သင်တန်းသားများလေ့လာရန်) မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီ
ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ တင်ပြချက်များ (မတ်လ ၂ဝဝ၄) ဦးအောင်ထူး
သမ္ဗောဓိ ဂျာနယ် ဗုဒ္ဓြွသာသနာပြုအဖွဲ့
နိုဘယ်ဆုရှင် မစ္စတာ ဟိုဆေးရာမို့(စ်)ဟော်တာသို့ အိပ်ဖွင့်ပေးစာ ၂ဝဝ၂ ဗB္န၌္က
ချစ်ကြည်ရေး (စက်တင်ဘာ ၂ဝဝ၃)
၇ ရက် ဇူလိုင်၊ နှစ် (၄ဝ) ပြည့်
နေ့စဉ်တွက်တာ မှတ်စရာ (အိမ်ဖော်အလုပ်သမားအခွင့်အရေး) အမှတ် ၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ဝဝ၇္နဗ္စ င်္သညိအေငသည
လူ့အခွင့်အရေး လက်စွဲ (လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအတွက် လက်တွေ့လမ်းညွန်ပြုစုသူမျာုးအေ့မပည နညါူငျ့ ရ ဗိှောအစေူနအသည
ရွေးချယ်တင်မြောက်ပုံစနစ်များ (မိတ္တူ) အကျဉ်း
ရိုဟင်ဂျာသမိုင်းကို စောဒကတက်နေသူများသို့ ရှင်းလင်းဖြေကြားချက်တစေ့တစောင်း ၂ဝဝ၃ ခု၊ စက်တင်ဘာ ၁၅ သုတေသီတစ်ဦး (ရန်ကုန်)
ရိုဟင်ဂျာပြဿနာနှင့် အနာဂတ်ရခိုင်ပြည် (လက်ရေးမူ)
ရခိုင်၊ မွန်နှင့် ချင်းပြည်နယ် တောင်းဆိုခြင်း (မိတ္တူ)
၊ ဒီမိုကရေစီနှင့် အမြစ်တွယ်နေသော ပဋိပက္ခများ (စေ့စပ်ဆွေးနွေးသူများ စဉ်းစားရန်မူများ) မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရံပုံငွေမှ ဘာသာပြန်ဆို ဖြန့်ချီသည်။
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းနှင့် ဝေဖန်သုံးသပ်ချကများ (အောက်တိုဘာ၊ ၁၉၉၉) အမှတ် ၄ Bကမာေ ၍ျကနျ
ဒေသဆိုင်ရာ ခေါင်းဆောင်များအတွက် လူမှုဆက်သွယ်ရေး အမျိုးသားကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေးကော်မတီ
မြန်မာ့ဓန အမှတ် ၁၅၉၊ အောက်တိုဘာ၊ ၂ဝဝ၃
ရိုဟင်ဂျာ အမည်ခံ ဘင်္ဂလီကုလားများ စာတမ်း
ရိုဟင်ဂျာ ဝေါဟာရပြဿနာအား အဖြေရှာခြင်း ရက္ခ
အိုးဝေ မဂ္ဂဇင်း တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂအသင်း
အနုပဋိလောမရုပ်ဝါဒနှင့် သမိုင်းဝါဒ (အခန်း ၄ ၊ အပိုင်း ၂) အကျဉ်း ဆိုဗီယက်ယူနီယံ ကွန်မြူနစ်ပါတီ (ဘော်ရှီဗစ်)
ရွှေခမောက် မှတ်တမ်းလွှာ အတွဲ ၄၊ အမှတ် ၈ ၁၉၉၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (လွတ်မြောက်နယ်မြေ) ဗဟိုသတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာန
လူ့အခွင့်အရေးပညာပေးလမ်းညွန့် ၂ဝဝ၄ အိပ်ခ်ျအာအီအိုင်ဘီ
မြန်မာဓန စီးပွားရေးမဂ္ဂ္ဂင်း အမှတ် ၁၆ဝ၊ နိုဝင်ဘာ ၂ဝဝ၃ခုနှစ်
မြန်မာ့ တပ်မတော်၏ ဖြစ်ရပ်မှန် ဗိုလ်ထက်မင်း ၂၁အုပ်
၂ဝဝ၇ ခုနှစ် စံဇာဏီဘို ယ ၁၂ ရာသီဟောကိန်း၊ စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်မှ အောင်တိုဘာ ၂၃ရက်၊ သီတင်းကျွတ်လ
ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၊ ပြည်သူ့ပ်မတော်သားမှတ်စု ၁၉၈၇ ခု၊ ဇန်နဝါရီ လ
ရာမ္မဝတီ၊ ရမ်းဗြဲမြို့၊ တောင်းကျောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီး အရှင်စန္ဒမာလလင်္ကရ၏ ရခိုင်ရာဇဝင်သစ်ကျမ်း မှတ်စု
ဦးစိန်ကျောလှိုင်၏ နဝတ ဈေးကွက်စီးပွားရေးမှတ်တမ်း နျစ်အုပ်
ီမိုကရေစီနိုင်ငံ၏အခြေခံအုတ်မြစ်များ ကတ်နက်ကေ မက်ကေးရေးသား၍ ဒေါင်းညိုဘာသာပြန်ဆိုသည်
ူယူအမ်အယ်လ်ဒီနှင့် အန်လမ်လ်ဒီ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ မှတ်တမ်း အာဘီအမ်လ်စီမှတ်တမ်းများ (၂ အုပ်)
နိုင်ငံတော်ကို ရင်နှင့်ဘတ်သော ကဗျာများ ၂ အုပ်
ကိုကိုးကျွန်းမှ ပုဒ်မ ၅ မောင်ချစ်ရီ
ကြောက်ရွံ့ခြင်းမှ လွတ်မြောက်ရေးနှင့် အခြားစာတမ်းများ ဒေါက်တာ အောင်ခင်
ပထမမြောက်ဦးခေတ်(အေဒီ ၁၄၃၁-၁၅၃၁) ရာဇဝင်ထဲက ရုပ်ပုံလွှာများ
မြန်မာပြည်ဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့ချုပ်၏ ပထမအကြိမ်ညီလာခံ၊ ပထမအကြိမ်ဗဟိုကော်မတီဝင် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ
စိတ်ဖောက်ပြန်မှု စံလွဲအပြုအမူများ ခင်မောင်သန်းစိတ်ပညာ ဒုတိယအကြိမ်
ရွှေချိန်ခွင် ဤ့န ဘေူညေခန သ်ွသိူ သျှင်ဥက္ကဋ္ဌ
တောင်တွင်းကြီးမြို့ နတ်မှီတောရ ဆရာတော်အရှင် ဦးဥက္ကဌ၏ ဘဝနှင့် အဘိဓမ္မာ
ဝရဇိန် ဇူလိုင် သြဂုတ်၊ စက်တင်ဘာ ရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးစစ်တပ်
လက်ကမ်းမကြို တောင်တန်းပေါ်က ဧည့်သည်များ လူအခွင့်အရေးပညာပေးဌာန (မြန်မာနိုင်ငံ)
အမှောင်လွမ်းနေသော ချိုင်းဝှမ်း ကချင်လူမှုဖွဲ့ဖြိုးရေးကွန်ယက်မှ ထုတ်ဝေသည်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူ့အခွင့်အရေးဟူသမျှဆုံးရှုံးခဲ့ရသော ကူကီလူမျိုးများ ကူကီးကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး
မြန်မာနိုင်ငအတွင်း အဓမ္မလုပ်အား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် ဂျနီဗာ၊ ဂျူလှိုင် ၁၉၉၈
အကျိုးစီးပွားများ၏ ပဌိပက္ခ အစီရင်ခံစာ အောင်တိုဘာလ ၂ဝဝ၃
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှ အိမ်ဖော်အလုပ်သမားများ ခိုင်မာကျော်စော
မြန်မာနိုင်ငံတွင်းအာဓမ္မလုပ်အား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် ဂျီနီဗာ၊ ဂျူလိုင် ၁၉၉၈
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပထမမူကြမ်း ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲရေးနှင့် ညိုနိုင်းမှုကော်မတီ
လူ့အခွင့်အရေးဝေါဟာရများ လူ့အခွင့်အရေးပညာပေးဌာန မြန်မာနိုင်ငံ
အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးနျင့်သက်ဆိုင်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သဘောတီူစာချုပ်များ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေဖြင့် သဘောတူညီလက်မှတ်ရေးထိုးပြီး
အလုပ်သမားသမဂဆိုင်ရညာ အသံလွင့် ဆောင်းပါးများ မေလ ၂၈၊ ၂ဝဝ၄ခုနှစ် ဦးအောင်ထူး ၂အုပ်
စစ်ဖိနပ်အောက်မှ ပြည်သူလူထု၏ ညီးတွားသံများ လူ့အခွင့်အရေးစာစောင် ပထမအကြိမ်၊ဧပြီ၊ ၂ဝဝဝခုနှစ်
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဂျာနယ် အမှတ် ၄ ဒီဖင်ဘာ ၂ဝဝဝ
နေ့စဉ်အတွက်မှတ်စရာ ၊ လူတိုင်းအတွက် ပညာရေး အမှတ် ၅ မေလ ၂ဝဝ၇ခုနှစ်
ရဟန်းပျိုများသမဂ ဂျာနယ် အတွဲ ၅၊ အမှတ် ၁ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ဝဝ၆
ရောင်ခြည်ဦး အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၆၊ ဂျာနယ် မစုစုနွေး ဂုဏ်ပြုအမှတ်တရ အထူးထုတ်
အမျိုးသားညီလာခံကျင်းပရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ချမှတ်သော နိုင်ငံတော်အခြေခံမူများ မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီ
ပန်းရိုင်းမြေ၊ ပန်းရိုင်းမြေအနုပညာ စုစည်းမှု
ကျွန်ပညာရေးနှင့် သခင်ပညာရေး တင်မောင်သန်း
သံလွင်ရေကာတာ ဖွံ့ဖြိုးရေးသူခဘုံလား ၊ပျက်သုန်းရေး အနိဌာရုံလား တိုင်းရင်းသားလူငယ်များဆုံရပ် ဇန်နဝါရီ ၂ဝဝ၅
အလုပ်သမားကာကွယ်ရေးအက်ဥဒေ ဘီအီး ၂၅၄၁ (၁၉၉၈) (၂) အုပ်
ရန်ပုံခွင်း တော်လှန်ရေးစာစု အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၂၊ သြဂုတ်လ ၂ဝဝ၄ခုနှစ် ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံအထူးထုတ်
ပြည်သူလွတ်တော်ခေါ်ယူရေးနှင့် ပတ်သတ်၍ အမျိုးသားဒီမိုကရေစိအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်များ၏ လတ်တလောကြေငြာချက်များ
သံလွင်ရဲ့ ဂန္တဝင် မောင်စင်ကြယ်
လူ့ဘောင်သစ်ဂျာနယ် အမှတ် (၁) ၊၂ဝဝ၇၊ခုနှစ် ဇါန်လ
ဖြစ်တည်မှု လွင့်ပြင်ထက်မှ နှောင်ကြိုးမဲ့ အစအနများ စုဖွဲ့မှု အောင်သင့်
လူ့အခွင့်အရေးလက်စွဲ လူ့အခွင့်အရေး ပညာပေးဌာန (မြန်မာနိုင်ငံ)
မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီရေးရာ လှုပ်ရှားမှု ဆောင်းပါးများ အရှင်ခေမာစာရ၊ ရဟန်းပျိုသမဂ
သမိုင်းပျောက်နေသောလူမျိုး ပတွဲ ပအို့သမိုင်းသုတေသနဌာနမှထုတ်ဝေသည်
ကမBာ့ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက် အမှတ် (၁၃၂၅) အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် မြန်မာနိုင်ငံမှထုတ်ဝေသည်။
မချစ်မနှစ်သက်သူတို့၏ မီးတောင် ညိုထက် လမ်းသစ်ဦး
အလုပ်သမားကာကွယ်ရေးအက်ဥဒေ ဘီအီး ၂၅၄၁ (၁၉၉၈)
ရွေကဖီး ဂျာနယ် ဇါန်လ ၂ဝဝ၄၊ အတွဲ ၃ အမှတ် ၁
ဆဲဗင်းဇူလိုင် သို့မဟတု ကျောင်းသားသမဂ၏ အစဉ်အလာကို ဖောက်ဖျက်ခြင်း မောင်မုန်းအောင်
မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးသမိုင်း ၁၉၄၅- ၂ဝဝဝ ဒေါက်တာသိန်းလွင်
လူ့ငယ်တို့၏ ဤမူအကျင့် ၂ စိတ်ထဲမှာ အဆုံးကစ လူငယ်စိတ်ဓါတ်မြင့်တင်ရေး
နိုင်ငံရေအကျဉ်းသားဟောင်းများနှင့် မိသားစုအသိုင်းအဝိုင်းများလက်စွဲ ဗဗ္စ္စ
းချမ်းစွာအတူလက်တွဲနေထိုင်ရေးဝါဒမှသည် စစ်မှန်သောပြည်ထောင်စု စနစ်ဆီသို့္ခဆလိုင်းလျန်းမှုန်းဆာင်ခေါင်
းချမ်းစွာအတူလက်တွဲနေထိုင်ရေးမှသည် စစ်မှန်သောပြည်ထောင်စုစနစ်ဆီသို့ စာအမှတ် ၇
သိကောင်းစရာ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး ဥပဒေများ လူ့အခွင့်အရေမှတ်တမ်းတင်ဌာန
နေ့စဉ်အတွက်မှတ်စရာ ၊ အလုပ်သမားများအခွင့်အရေး ယူအမ်အိပ်ချစီအာ
၂ဝဝ၂၊ ဝ၃ ခုနှစ် ကျန်းမာရေးမှူးသင်တန်းနှင့် မိခင်နှင့် ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးသင်တန်း အမှတ်တရ မဂဇင်း
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း ၁ဝ နျစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ်
အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲရာတွင် အခြေခံရမည့် လမ်းညွန်အခြေခံမူများ
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့စဟည်းပုံအခြေခံ ဥပေဒရေဆွဲရေးဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း င်္ဃီဃဃ
မြန်မာနိုင်ငံ ဗုဒ္ဓြွဘာသာသံဃာတော်များ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး လူ့အခွင့်အရေး ဒီမိုကရေစီရေး ကြိုးပမ်းမှု မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံများ
ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးများနေ့ အထိမ်းအမှတ် မှတ်တမ်း၊ ၁၉၊ ၆၊ ၂ဝဝ၁
အင်အားစုစည်းခြင်းမြန်မာနိုင်ငံအမျုိးသမီးများ မိမိတို့ အခွင့်အရေးများနှင့် ပတ်သတ်၍ ပြောဆိုချက်များ
ဘင်္ဂလားအော်လှိုင်းသံနှင့် ဖက်စရာမှတ်စာများ အမှတ် ၁
ချင်းအမျိုးသားဂျာနယ်၊ အမှတ် ၉၊ မေလ ၊ ၂ဝဝ၂
အကြမ်းဖက် ပဌိပက္ခများ ပြီးဆုံးပြီးနောက် ပြည်လည်ရင်ကြားစေရေး ပေါ်လစီအနှစ်ချုပ် ဦးတိုးဇော်လတ် ပြုစုသည်
ရွှေရတုံ အမှတ်စဉ် ၁၁၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ၊ လွတ်မြောက်နယ်မြေ ၊ ဂျပန်ပြည်
ကမေBာဒီးယားတွင် ဘဝပြန်လည်ထူထောင်ရေး္နန္ဒျေနန
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့စည်းပုအခြေခံဥပေဒေ မူကြမ်း င်္ဃီဃဃ
ကုလသမဂ၏ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက်များ
လူ့အခွင့်အရေးသင်တန်းနည်းပြ လက်စွဲ လူ့အခွင့်အရေးပညာပေးဌာန မြန်မာနိုင်ငံ
အငြင်းပယ်ခံ ဗျင္စေခေင်ငခ င်္သမကာ သည္တသာနညယူတေ ညေီနလနူသစာနညအ
တစ်နှစ်အတွင်း မြန်မာသတင်း ၂ဝဝ၁ ခုနှစ်၊ မှတ်တမ်းတင်ဌာန ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအင်အားစု
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားမျးသမဂ စိန်ရတုသဘင် တကသ ၇၅ နျစ်မြောက် ၂ဝဝ၆
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားကောင်စီ ၊ ရှစ်လေးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီး ၁၃ နျစ်မြောက်အခမ်းအနားမှတ်တမ်း
ဦးနေဝင်းနှင့် လက်မရွံ့အာဏာသားများ ကြေးမုံဦးသောင်း
တိုင်းရင်းသားလူငယ်အသံ ဂျာနယ်၊ ချစ်ကြည်ညီညွတ်ခြင်းမှ အမျိုးသားဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆီသို့ အမှတ် ၂
ရဟန်းပျို ဂျာနယ် အတွဲ (၅) အမှတ် ၁၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ဝဝ၆
ံအနနု့ပေဲသကမညေူ ဠသူ ၁၊္ဒသ ၁ယ ၁၉၉၉ ယ ကြူပ
သင့်ရဲဘော် အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၂၊ ဇွန် ၆၊ ၂ဝဝ၅ မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားသွေးစည်းညီညွတ်ရေးအဖွဲ့
၃၆ ခုနှစ် ပလောင်အမျိုးသား တော်လှန်ရေးနေ့ အထူးထုတ်ဂျာနယ်၊ ၁၂ရက်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၁၉၉၉ခုနှစ်
တိုင်းရင်းသားလူငယ်များ ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဂျာနယ် အမှတ် (၁)
သင့်အတွက် ဖြည့်ဆက်ပညာရေး အမှတ်စဉ် ၉
လူ့ဘောင်သစ်ဂျာနယ် အမှတ် ၁၊ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် ဇါန်လ
လူ့ဘောင်သစ်ဂျနယ် အမှတ် ၁၊ ၂ဝဝ၂၊ခုနှစ် နိုင်ဝင်ဘာ
ဘောဂဓေဒဂျာနယ်၊ အမှတ် ၂၊ အတွဲ ၄
ဒေါင်းအိုးဝေ အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၂၊ ဧပြီ၊ မေ၊ ဇွန်၊ ၂ဝဝ၇ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး
ချစ်ကြည်ရေး (အတွဲ၊ ၄၊ နိုဝင်ဘာ ၂ဝဝ၆
မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး၊ နိုင်ငံရေးနှင့် ကျောင်းသားလူငယ်များရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ မြန်မာနိုင်ငံကျောင်းသားများကွန်ကရက်
ီမိုကရေစီလေ့လာရေးဂျာနယ် အမှတ် ၂၊ ၂ဝဝ၇၊ မတ်လ
ရောင်ခြည်ဦး ဂျာနယ် အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၆၊ စုစုနွေးအထူးထုတ်
သနူးဂျာနယ်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂ဝဝ၅ ကေအန်ယူ
လူ့ဘောင်သစ်ဂျာနယ် ပါတီ ၁၇ နျစ်မြောက်နေ့အထ်ိမ်းအမှတ်
သမ္ဗောဓိ ဂျာနယ် အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၄၊ နိုဝင်ဘာ ၂ဝဝ၄ ဗုဒ္ဓြွသာသနာပြုအဖွဲ့
ရဟန်းပျို ဂျာနယ် အတွဲ (၅) အမှတ် ၂၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂ဝဝ၆၊
တိုးတက်သော မွန်လူငယ်များဂျာနယ် အတွဲ၊ ၆၊ ဇါန် ၂ဝဝ၄
ကြိုးကြာသံဂျာနယ် အတွဲ၊ ၁၊ အမှတ် ၁၊ ဇွန်နဝါရီလ၊ ၂ဝဝ၆ ခုနှစ် နိုင်ငံရေးဒုက္ခသည်များအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ
ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံစည်းမျဉ်း (၁၉၇၉ ခု စက်တင်ဘ ၁၃) မတ်လ၊ ၂ဝဝ၃
ရခိုင်ငံသမိုင်းသစ် ဘီစီ ၃၃ဝဝ မှ အေဒီ ၂ဝ ရာစုထိ
လူ့အခွင့်အရေး ဝေါဟာရများံ္မန၍B
လူ့အခွင့်အရေး အတွေးအခေါ် အခြေခံများမှ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများကို ချဉ်းကပ်လေ့လာခြင်း ဦးအောင်ထူး
လူ့အခွင့်အရေးပညာပေးလမ်းညွှန် ၂ဝဝ၄ံ္မန၍B
ငြိမ်းချမ်းရေး ဖခင်ကြီး ဒေါက်တာသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း နှစ် ၁၃ဝ ပြည့်အထူးထုတ်
ယဉ်ကျေးမှုများတိုးတိုက်မိခြင်းနှင့် မဟာပြိုကွဲမှုကြီး ကျော်ဝင်း
သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း နိဒါန်း လူထုဦးလှ၊ ဇော်ဂျီ၊ ဦးဘဖေ၊ မင်းသုဝဏ်
တိုင်းရင်းသားတို့၏ တူညီသော ရိုးရာဓလေ့ထုံးစံများ မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီဌါနချုပ်
လူ့အခွင့်အရေးအတွေးအခေါ်အခြေခံများမှ ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေ ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများကို ချဉ်းကပ်လေ့လာခြင်း
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အတ္တုပတ္တိ ၊ သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းတည်းဖြတ်၍ ရဲဘော် သခင်နငျ့် ကျောင်းနေဘက်များစုပေါင်းတည်းဖြတ်သည်။
ဗမာပြည်လုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားနှင့် လူငယ်များကွန်ကရက် ၂ဝဝ၅ခု ၊ မတ်လ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီတပ်ပေါင်းစု စတုတအကြိမ်ညီလာခံ အစည်းဝေးမှတ်တမ်း ၁၉၇၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက် ၁၅
အမျိုးသားရေးတွင် တာဝန်ကျေခဲ့သော တရားရုံဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ဦးကျော်ဇေယျ
ချင်းလဲန်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ မူကြမ်း ၄ ချင်းအမျိုးသားများစုရပ်
ဝံလက်ရဲ့အားမာန်နှင့် အခြားကဗျာများ ခိုင်လင်း (မေဃသတီ)
လူ့အခွင့်အရေးမေးခွန်းနျင့်အဖြေများ လူ့အခွင်အရေးပညာပေးဌာန မြန်မာနိုင်ငံ
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ မူကြမ်း င်္ဃီဃဃ
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ တင်ပြချက်များ ဦးအောင်ထူး
အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပေဒေ မူကြမ်း ဖွင့်ဆိုချက်
လူထုအဓိကလူ့အဖွဲ့အစည်း မြန်မာနိုင်ငံ ရှေ့နေများကောင်စီ
လူ့အခွင့်အရေးမိတ်ဆက်နှင့် နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးဥပဒေများဘာသာရပ် မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီ
အနာဂတ် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောငစု ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ မူကြမ်း င်္ဃီဃဃ
အမျိုးသးညီလာခံ ကျင်းပရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ချမှတ်သော နိုင်ငံတော်အခြေခံမူများ မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီ
အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောငစု ဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ရာ အခြေခံမူများချမှတ်ရေး နှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှတ်တမ်း
လက်တွေ့လူ့အခွင့်ရေး ခံစားထိုက်သူ အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးများအား အကူအညီပေးလမ်းညွန်
နတ်မြစ်မောင်òမိ့နယ် မဂ္ဂဇင်း အသျှင်စက္ကိန္ဒ ၊ဦးသာသာမောင်၊ ဦးလှòဖသန်း၊ ဦးမောင်ဝင်း၊
ရက္ခပူရ ဗုဒ္ဓြွသာသနာအလင်းရောင် လေးနျစ်မြောက်
လခြမ်းမြီမဂ္ဂဇင်း အမှတ် ၁ စင်တင်ဘာ ၉၇
ပေါ်တော်မှုလာ မုနိ ဘုရားကြီးသမိုင်း အေဒီ ၁၅၃၁ -၁၆၃၁ မင်းဘာဘုရင်တည်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြုစ်ပေါ်ခဲ့သော ပြည်တွင်းသောင်းကျန်သူများနှင့် ပက်သက်၍ ပြည်သူသို့တင်ပြချက် အကျဉ်းချုပ်
ဦးရာဇ်မြေ ၂ဝဝဝ ပြည့်နှစ်မဂ္ဂဇင်း မောင်ကျော်ဦး၊ အောင်လှသံ ၊ ချမ်းမြေစည်၊ ဦးမောင်တင် ၊ မောင်ထွန်းသိန်း
ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေòမိ့ နန္ဒာရာမ ပရိယတ္တိ စာသင်တိုက် ၊ ငွေရတုစာစောင် မြန်မာသက္ကရာဇ် -၁၃၄ဝ ခုနှစ်မှ ၊ ၁၃၆၅ ခုနှစ်ထိ ၂၅နှစ်မြောက်ငွေရတုစာစောင်အထိမ်းအမှတ်
ရခိုင်မဂ္ဂဇင်း စာပေသမုိုင်းယဉ်ကျေးမှုအနုပညာ အမှတ် ၂၇
ယုတ္တိဓေဒကျသော ဘောင်အတွင်းမှာ ချဉ်းကပ်ခြင်း အချက်အလက်အခြပြု စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းလက်စွဲ
ီမိုကရက်တစ်လူ့ဘောင်တွင် စစ်တပ်နှင့် အခြားလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များ၏ ဤခန်းကဏ္ဍ မြန်မာနိုင်ငံရှေများကောင်စီ စက်တင်ဘာလ ၂ဝဝ၅ ခုနှစ်
အမျိုးသမ်ီးအခွင့်အရေးနှင့် ကိုယ်ဝန်ပျက်စေခြင်းအခြေခံဥပဒေရေးရာ ရှုဒေါင့်မှလေ့လာတင်ပြချက် အမှတ်စဉ် (၁၁) ၊ သြဂုတ်လ၊ ၂ဝဝ၁
တရားမျှတသော တရားခွင်လွတ်လပ်သောတရားစီရင်ရေးနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြခံဥပဒေ မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နယ်များကောင်စီ
ရသစာပေ၏ ရသ မဟာဝိဇ္ဇာ(သက္ကတ)၊ ဝံဠသကာနှင့် သိရာမဏိ ဦးရွေအာင် ဒုတိယအကြိမ်
ီမိုကရေစီလေ့လာရေးဂျာနယ် ၊ အမှတ်စဉ် (၁) ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်ဖေဖေါ်ရီလ လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီသုတေသနနှင့် လေ့လာရေးဌန
အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ရာခြေခံမှုများချမှတ်ရေးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှတ်တမ်း ၂ဝဝ၅ ဖေဖော်ရီလ ၉ရက် မှ ၁၂ ရက်
အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားကောင်စီ
တတိယအကြိမ်မြောက်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများနှီးနှော်ဖလှယ်ပွဲမှတတမ်းများ ၂ဝဝ၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့မှ ဖေဖ်ာဝါရီလ ၂ ရက်နေ့အထိ
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ဂျာနယ် အမှတ် (၄)္ဒ္ကီဃ
ဲမြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး၊ နိုင်ငံရေးအတွက် ကျောင်းသားလူငယ်များရဲ့အခန်းကဏ္ဍ ၊ ဦးတင်ဇော်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
ဲမြန်မာနိုင်ငံတွင်း နိုင်ငံတကာမှ ကူညီထောက်ပံ့နေမှုအပါ် စိုးရိမ်ပူပန်နေသော တသီးပုဂ္ဂလများ၏သဘောထ်ား၏သဘောထားရပ်တည်ချက်
မြန်မာနိုင်ငံမြေမြုပ်မိုင်းလေ့စောင့်ကြပ်ရေးအဖွဲ့ ၂ဝဝ၂ ခုနှစ် အစီရင်ခံစာ
လူထုအဖွဲ့အစည်းနှင့် အမျိုးသားနိုင်ငံ အမျိုးသားကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေးကော်မီတီ ပထမ အကြိမ် ၂ဝဝ၂
ကျန်းမာရေးစေတမန် အမှတ် ၁၈ နိုဝင်ဘာ ၂ဝဝ၂ ခုနှစ်
ကျွန်မ ခန္ခနဲ့ ကျွန်မဘဝ ပြည့်တန်းဆာအားလုံ့းအတွက် အခွင့်အရေးနျင့်ကျန်းမာရေး
ကျန်းမာရေးစေတမန် အမှတ်၁၂ မတ်လ ၂ဝဝ၁
ကျန်းမာရေးစေတမန် အမှတ် ၁၉ မတ်လ ၂ဝဝ၃
ကျန်းမာရေးစေတမန် အမှတ် ၁၇ သြဂုတ်လ ၂ဝဝ၂
ကျန်းမာရေးစေတမန် အမှတ် ၂၆ ဒီဖင်ဘာ ၂ဝဝ၄
နွေဦးအိုးဝေ အမှတ် (၄) အတွဲ (၁) အောက်တိုဘာလ ၂ဝဝ၆
ညီနောင်အားမန် တိုင်းရင်းသားလူငယ်များ၏ အတွေ့အကြုံနှင့် အတွေးအမြင်ဆောင်း
မရည်ရွယ်ဘဲ ကိုယ်ဝန်ရရှိခြင်း မယ်တော်ဆေးခန်း
္တနှလုံးသွေးတစ်စက် ဝတ္ထုတို စုစည်းမမှု
လူတိုင်းမှတ်စရာ အေအိုင်ဒီအတ်စ်ရောဂါ မယ်တော်ဆေးခန်း
ကယ်တင်ရေးဂျာနယ် အမှတ် (၂) ၂ဝဝဝခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံမွတ်စလင်မ်ကယ်တင်ရေးအစည်းအရုံး
ပညာပုံရိပ် စာစောင် အမှန် (၁) အောက်တိုဘာလ ၂ဝဝဝ ခုနှစ်
္စဟစ်တိုင် ဂျာနယ် အတွဲ ၁ အမှတ် (၃) ၂ဝဝ၄ ခုနှုစ် အဖိနှိပ်ခံပြည်သူများ၏ ဟစ်တိုင်
ကျန်းမာရေးစေတမန် အမှတ် ၃၄ ဒီဖင်ဘာ ၂ဝဝ၆
တိုင်းသားလူမျိုးများကောင်စီ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ၏လုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာ ဧပြီလ (၂၈) ရက်မှ မေလ (၁) ရက် ၊ ၂ဝဝ၅ခှုနှစ်
မုဒိမ်းကျင့်ခွင့်လိုင်စင် မြန်မာနိုင်ငံ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားနေသော စစ်ပွဲ အတွင်းမြန်မာစစ်အစိုးရ အသုံးပြုလျက်ရှိသ
ဒေါင်းမန် ဖေဖော်ရီလ ၂ဝဝ၇ မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
ကျောင်းပညာရေးသုတေသနဂျာနယ် ဇန်နဝါရီ ၂ဝဝ၆ီအမျိုးသားကျန်းမာရေးနှင့် ပညာေးကော်မတီ
ရခိုင်ပြည် စက်တင်ဘာ ၂ဝဝ၁ ရခိုင်ပြည်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
ဒေါက်တာဘွတ်ကာတ်ီဝါရှင်တန် ရွေသဒေါင်း ဒုတိယအကြိမ်
ဇတ်ခုံကမBာ ဇတ်ဆောင်ကမBာ ထွန်းသစ်
ပြည်ထောင်စုနှင့် ပက်သက်သည့် ဆွေးနွေးပွဲများမှ တင်ပြဆွေးနွေးချက်များ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားကောင်စီ
မည်သူ၏ လုံခြုံရေးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သနည်း အရှေ့တောင်အာရှဒေသအတွင်းလက်နက်ကိုင်အကြမ်းဖက်ခြင်းနှင့် လူသား
ကျန်းမာရေးစေတမာန် အမှတ် (၃၆) ဇွန်လ၂ဝဝ၇ အရေပြားရောဂါ
အတွေးအမြင် အမှတ်စဉ် (၁၈၇) အောက်တိုဘာလ ၂ဝဝ၇ ခရီးနှင့် လမ်း ခင်မာလာကြာဖြူ
ရယ်စရာ မဂ္ဂဇင်း အမှတ် (၂၃) အောက်တိုဘာလ ၂ဝဝ၇
ဟစ်တလာ လုပ်ခဲ့သမျှ ရွေသဒေါင်း ဒုတိယအကြိမ်
နာင်္ဇပဠိညာဉ်ခံ အထောက်တော်လှအောင် ဒုတိယအကြိမ်
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၆ စက်တင်ဘာလ ၂ဝဝ၇ B္တ္က
ပင်တဂွန် မောင်ပေါ်ထွန်း ဒုတိယအကြိမ်
အတွေးအမြင် ဒသနခေါင်းဆောင်ကြီးများ အမှတ်(၁)သြဂုတ်လ ၁၉၉၄
ဆွန်ဇူး၏ ရှင်သန်အောင်မြင်ရေးနည်းလမ်းများ ကြည်မင်း
သေနင်္ဂဗျုဟာ အတတ်ပညာ ချစ်နိုင်(စိတ်ပညာ)
အရှေ့ကနေဝန်းထွက်သည့်ပမာ သိန်းဖေမြင့် အဌမအကြိမ်
နို်င်ငံတော်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးအတွက် အမျိုးသားညီလာခံကျင်းပရေးကော်မတီမှ ချမှတ်သော နိုင်ငံတော်အခြေခံမှုများ
ကျွန်ပညာရေးနှင့် သခင်ပညာရေး တင်မောင်သန်း
စာဆိုတော်လရာသီ အထိမ်းအမှတ် ၊အမှတ်(၅၈) ဒီဖင်ဘာလ ၄ ရက်
စစ်တွေကောလိပ်မဂ္ဂဇင်း ၈၃၊ ၈၄
ုမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစု အတွဲ(၁) အမှတ် ၅ စက်တင်ဘာလ ၂ဝဝ၇
အောင်ဆန်းစုကြည် ကြောက်ရွ့ခြင်းမှ လွတ်ကင်းရေးအခြားစာတမ်းများ
အရုဏ်ဦးခရီးသည် တော်လှန်ရေးဆိုင်ရာ ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိ မကြည်လေး(ရဲဘော်ငွေ )
စကားပြောတတ်ဖို့ သုတေသီ ဘုန်းမြင့်သွေး
ူုလူ့ဘောင်သစ်ဂျာနယ် အမှတ်(၁) ဇွန်လ၂ဝဝ၇
ရှစ်စက္ကန့် ငြိမ် စွန့်လွတ်သူတို့၊၏ ရာဇဝင်္တနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (မြန်မာနိုင်ငံ)
ရွေါဒေါင်းတောင်မဂ္ဂဇင်း ၂ဝဝဝ ပြည့်နှစ်ဒီဖင်ဘာ
ဒေါင်မိခင်စာစောင် အမှတ်(၂) စက်တင်ဘာလ ၂ဝဝ၁
ကနောင်မင်းသားနှင့် လှိုင်ထိပ်ခေါင်တင် စိမ့်(ပညာရေး)
မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးသမိုင်း ဇန်နဝါရီလ ၂ဝဝ၃ ခုနှစ် ဒေါက်တာသိန်းလွင်
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ၏ ဖွဲ့စည်းအုပ်ထချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ ၁၉၄၇ခုနှစ်
သင့်ရဲဘော်ဂျာနယ် အတွဲ(၁) အမှတ် (၁) မေ ၂ဝဝ၅
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ကျမ်းမာရေး ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင်
လူ့ဘောင်သစ်ဂျာနယ် အမှတ်(၁) ဇွန်လ၂ဝဝ၇
သင့်ရဲဘော်ဂျာနယ် အတွဲ(၁) အမှတ် ၂ ဇွန်၂ဝဝ၅
လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်စောက်ရှောက်သူများ အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ)
မြန်မာနို်င်ငံရှေ့နယ်များကောင်စီ ၊ အောက်တိုဘာလ (၂ဝ)ရက် (၁ဝ)နျစ်မြောက်အထိမ်းအမှတ်စာစောင်
ပအိုင်းအမျိုးသမီးစာစောင် ၊ အမှတ် (၂) စက်တင်ဘာလ ၂ဝဝ၃ ပအိုင်းအမျိုးသမီးသမဂ္ဂ
ပြည်တွင်း၌ အဓမ္မနေရပ်ရင်းဇာတိမှ ပြောင်းရွေ့ထွက်ပြေးရမှုများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ဘက်ပိုင်း ဒေသများတွင် ထိခိုက်နစ်နာရမှုများ
မြန်မာပြည်မြောက်ဖျား သစ်တောများဖျက်ဆီးမှုအဆုံးသတ်ရေး တကမBာလုံးဆိုင်ရာ သက်သေသက္ကာယအဖွဲ့ကြီး၏ အစီရင်ခံစာ
မြေမြုပ်မိုင်းများ လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ၂ဝဝ၄ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ ၅နှစ်တာအထူးသုံးသပ်ချက်
ကလေးတွေနဲ့အတူ ကမBာကြီးကို ပြောင်းလဲကြပါစို့ ယူနီဆက်
ကလေးကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု ဆန့်ကျင်ရေး ပညာပေးစာစောင် စိုင်းခမ်းဇင်
လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာသတင်းစုဆောင်းမှုလက်စွဲ၊ အခြေခံလူထုလှုပ်ရှားမှုအတွက် လမ်းညွန့် ပထမအကြိမ် ၁၉၉၈
လက်ကမ်းမကြို တောင်တန်းပေါ်က ဧည့်သည်များ လူ့အခွင့်အရေးပညာပေးဌာန မြန်မာနိုင်ငံ
ကလေးလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာစာချုပ် လူ့အခွင့်အရေးပညာပေးဌာန မြန်မာနိုင်ငံ
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုဆောင်းပါးများ အရှင်ခေမာစာရ၊ ရဟန်းပျိုသမဂ
မြန်မာနိုင်ငံ မြေမြူပ်ပိုင်းများ စောင့်ကြည့်ရေး အစီရင်ခံစာ ၂ဝဝ၁ခုနှစ်
ရွှေကဖီးဂျာနယ် ဇါန် ၂ဝဝ၄ အတွဲ ၃၊ အမှတ် ၁္စူပလောင်အမျိုးသမီး အဖွဲ့
းချမ်းစွာအတူလက်တွဲနေထိုင်ရေးဝါဒမှသည် စစ်မှန်သောပြည်ထောင်စုစနစ်ဆီသို့ ဆလိုင်းလျန်းမှုန်းဆာခေါင်း
ရွှေဒေါင်းတောင် မဂဇင်း ၂ဝဝဝ၊ ဒီဖင်ဘာလ
နေ့စဉ်အတွက်မှတ်စရာ၊ လူတိုင်းအတွက်ပညာရေး အမှတ် ၅၊ မေလ၊ ၂ဝဝ၇
ဒေါင်းမိခင်စာစောင်၊ ၂ဝဝ၁၊ စက်တင်ဘာလ အမှတ် ၂
နွေဦးအိုးဝေ အမှတ် အောင်တိုဘာ၊ ၂ဝဝ၄ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လွတ်မြောက်နယ်မြေ
အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ရာ အခြေခံမူများ ချမှတ်ရေး နှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှတ်တမ်း
ရနံ့သစ် မဂ္ဂဇင်း အမှတ် ၁ဝ၈၊ ၂ဝဝ၄၊ ဇါန်နဝါရီ
ကလေးအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ စာချုပ် လူ့အခွင့်အရေးပညာပေးဌာန မြန်မာနိုင်ငံ
ရေဆန်လမ်းသို့အပြန် နိုင်ဝင်းဆွေ အမှတ်တရကဗျာများ
မြန်မာနိုင်ငံမှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ လုပ်အားရွေ့ပြောင်းမှိုီိမိုကရေစီနှင့် ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအင်အားစု
သူုတို့ပြောတဲ့ သူတို့အကြောင်း ခိုင်မာကျော်ဇော
၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ် မေလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကော်ပွဲ မှတ်တမ်း၊ ခင်ကျော်ဟန် (မြန်မာနိုင်ငံ)
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ မထမမူကြမ်း င်္ဃီဃဃ
ီမိုကရေစီဆွေးနွေးခန်း ဆောင်းပါးများ ဒေါက်တာအောင်ခင်
နေ့စဉ်အတွက်မှတ်စရာ ၊ အိမ်ဖော်အလုပ်သမားအခွင့်အရေး အမှတ် ၄၊ ဖေဖေဝါရီ ၂ဝဝ၇
ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ခြင်း ၁ဝ နျစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ်
သိကောင်းစရာ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး ဥပဒေများ လူအခွင့်အရေးပညာပေးဌာန (မြန်မာနိုင်ငံ)
လူ့အခွင့်အရေး မေးခွန်းနှင့် အဖြေများ လူ့အခွင့်အရေး ပညာပေးဌာန
အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာမျာှး္ဒျဗ္နန။
လိင်ပိုင်းဆိုင် ထိပါးနှောက်ယှက်ခြင်းဆိုသည်မှာ ဇူလိုင် ၁၇၊ ၂ဝဝ၅
မြောက်ပြန်လေ နှောင်ကြိုးမဲ့စာစီုဖင်ဘာ ၁၉၉၂
အားမာန် အလုပ်သမားစာစောင် နျစ်ပတ်လည်နေ့စာစောင် အတွဲ ၁ ၊ အမှတ် ၁၊ ဒီဖင်ဘာလ ၂ဝဝ၇
မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဒေသများတွင် နေရပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးရမှုများ ၂ဝဝ၆ ၊ စစ်တမ်းကောက်ယူချက်
ီပဲယင်းလုပ်ကြံမှု အရေးယူဆောင်ရါက်ရေးကော်မရှင် ဒုတိယအကြိမ် မဏာမအစီရင်ခံစာ
လူ့အခွင့်အရေးအရေခြုံ ရိုဟင်ဂျာ အမည်ခံ စစ်တကောင်းအ အနွယ်ဝင်ဘဂါင်္လီတ်ို့၏ နယ်ချဲ့ထွင်ရေးသမိုင်းလ်ိမ်ကို ဝေဖန်ခြင်း
မြန်မာပြည် ကရင်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်များ မောင်စင်ကြယ်
သခင်၏ ဗထရုပ္ပတ္တိ စာစဉ်အမှတ် ၃၂
ဧရာ၊ မြစ်ဝါ၊ ၊ ဂဂါင်္ နိုင်ငံတကာ မဂ္ဂဇင်း အမှတ် ၂၊ ဒီဖင်ဘာ ၂ဝဝ၆
လရောင်ရွန်းသော ညတစ်ည ဂုန်တာရာ ဒုတိယအကြိမ်
မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြောင်းလဲမှုအတွက် အမျိုးသမ်ီးများ၏ အသံများ သနပ်ခါးအဖွဲ့
အာရောဂျံ ကျမ်းမာရေးမဂ္ဂဇင်း ဒေါက်တာတင်ထွန်းဦး
နေရဉ္စရာ သစ္စာသံများ မောင်ပြည်အေး(သံတွဲ)
ီမိုကရေစီ ဂျာနယ် အမှတ် ၂ မေလ ၂ဝဝ၇
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများပူးတွဲ အစီရင်ခံစာ ၂ဝဝ၄ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ
မြန်မ္တာန်ုိုင်ငံ မျှော်လင့်ချက် အတွက် အမျိုးသမီးများ၏ အသံများ သနပ်ခါးအဖွဲ့
မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ခြင်းအတွက် အမျိုးသမီးများ၏ အသံများ သနပ်ခါးအဖွဲ့
ပင်လုံစိတ်ဓာတ် ရှင်သန်ဖော်ဆောင်ရေးမှ စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံတော်သစ် တည်ဆောက်ရေးဆီသို့
မြန်မာနိုင်ငံမှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ လုပ်အားရွေ့ပြောင်းမှီုမိုမရေစီနှင့် ဖွံ့òဖိးတိုးတက်ရေးအင်အားစု (္ဒီ)
အိမ်ဖော် အလုပ်သမားအခွင့်အရေး ၊ နေ့စဉ်တွက်တာမှတ်စရာ ၊ အမှတ် ၄ ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ဝဝ၇
ရွေဖိဦး ၂ဝဝ၅ ၊ သြဂုတ်လ
ဲငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယဉ်တွဲနေထိုင် ရေးဝါဒမှသည် စစ်မှန်သော ဖက်ဒရာယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ဆီသို့ တတိယတွဲ
လူ့အခွင့်အရေးလက်စွဲ လူ့အခွင့်အရေး ပညာပေးဌာန
ကလေးအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ စာချုပ် လူအခွင့်အရေးပညာပေးဌာန (မြန်မာနိုင်ငံ)
ဝံလက်ရဲ့အားမာန်နှင့် အခြားကဗျာများ ခိုလင်း(မေဃဝတီ)
့ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယဉ်တွဲ နေထိုင်ရသည့် စစ်မှန်သော ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနှစ်သို့ စာစဉ် အမှတ် ၁ဝ
ကလေးကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု ဆန့်ကျင်ရေး ပညာပေးစာစောင်
လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာသတင်းစုဆောင်းမှုလက်စွဲ၊ အခြေခံလူထုလှုပ်ရှားမှုအတွက် လမ်းညွန့်
လူ့အခွင့်အရေးလက်စွဲစာအုပ် ၊ လူ့အခွင့်အရးစောင့်ကြပ်ရေးအတွက် လက်တွေ့လမ်းညွန်ပြုစုသူများ
ရွေခမောက်မှတ်တမ်းလွာ ၊ အတွဲ(၃) ၊ အမှတ် (၇) ၊ သြဂုတ်လ ၁၉၉၇ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
လူ့အခွင့်အရေးအတွက်ရပ်တည်ကြပါံ၍ဠဿဗ၍ှီ
ဲငြမ်းချမ်းစွာ အတူလက်တွဲတေထိုင်ရေးဝါဒမှသည်စစ်မှန်သော ပြည်ထောင်စုဆီသို့ (ပထမတွဲ)၊
သိကောင်းစရာ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး ဥပဒေများ လု့အခွင့်ရေးပညာပေးဌာန
လူငယ်တစ်ဦးရဲ့မှတ်တမ်းမဲ့ မှတ်တမ်း ဝင်းနိုင်ဦး
အကျိုးစီးပွားများ၏ ပဠိပက္ခ- မြန်မာ့ သစ်တောများ၏မသေချာသောအနာဂတ် တကမBာလုံးဆိုင်ရာ သက်သေသက္ကာယအဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာ၊ အောက်တိုဘာ ၂ဝဝ၃
အားမာန်သစ် မဂ္ဂဇင်း၊ တတိယအကြိမ်မြောက်
အောင်ဆန်းဂျာနယ် ဇူလိုင်လ ၂ဝဝ၅
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသာဟောင်းများနှင့် မိသားစုအသိုင်းအဝိုင်းများလက်စွဲ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း(မြန်မာနိုင်ငံ)
ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယဉ်တွဲ နေထိုင်ရေးမဝါဒမှသည် စစ်မှန်သောပြည်ထောင်စုဆီသို့၊ စာစဉ်အမှတ်(၅)
တိုင်းရင်းသားအရးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ မှုဝါဒများကြေညာချက်များ စာတမ်းများမှကောက်နုတ်ချုက်များ
သေမင်းတမန်ရေကာတာ ကရင်မြစ်ချောင်းများစောင့်ကြပ်လေ့လာရးအဖွဲ့ ၊ ဇန်နဝါရီ ၂ဝဝ၅
ခြောက်သွေ့ရပ်ဝန်းစိုက်ပျိုးရေး လက်တွေ့လမ်းညွန် အမှတ်(၃)
ရှစ်လေးလုံး လူထုအရေးတော်ပုံကဗျာမျုား (၈) လေးလုံးလူထုအရေးတော်ပုံကြီး (၁၄) နျစ်မြောက်အထိမ်အမှတ်
အသွင်ကူုးပြောင်းရေးဆိုင်ရား တရားမျှတမှု သဘောတရားအခြေခံမိတ်ဆက် လူ့အခွင့်အရေးပညာပေးဌာန မြန်မာနိုင်ငံ
ပြောင်းလဲမှုများလုပ်ဆောင်ခြင်း အောင်မြင်သော လူ့အခွင့်အရေးပညာပေးမှု ဇတ်လမ်းများ
ကလေငယ်များအား စစ်သားအဖြစ်အသုံးòပမှု ရပ်တန့််ရေး လူ့အခွင့်အရေးပညာပေးဌာန မြန်မာနိုင်ငံ
မျက်လုံးသစ် ၊ အမှတ်(၄)
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားကောင်စီ၊ (၈)လေးလုံး ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီး (၁၃)နျစ်မြော်က် အခမ်းအနားမှတ်တမ်း
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီတပ်ပေါင်းစု(မဒတ) တတိယအကြိမ်ညီလာခံ ဗဟိုသဘာပတိအဖွဲ့ အရေးပေါ်အစည်းအဝးမှတ်တမ်း
မြန်မာပြည်ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်အဖွဲ့ချုပ် (မဒမခ) ဒုတိယအ်ကြိမ်ညီလာခံမှတ်တမ်း
ပြသနာအားချဉ်းကပ်ဖြရှင်းခြင်း အမျိုးသာကျန်းမာရေးနျင့်ပညာရေးကော်မီတီ ပထမအကြိမ် ၂ဝဝ၂
ပိတောက်စည်သံ ဂျာနယ် အတွဲ၁ ၊ အမှတ်(၂၁)ဧပြီလ ၂ဝဝ၃
မျက်လုံးသစ် ဂျာနယ် အမှတ်စဉ်(၅)
အလုပ်သမား သမဂ္ဂဆိုင်ရာအသံလွင့်ဆောင်းပါးများ ၊ ဇါန်လ ၁၄ ရက် ၊ ၂ဝဝ၃ ခုနှစ် ဦးအောင်ထူး
ဒေါင်းအ်ုးဝေ၊ မြန်မာနုိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး အတွဲ(၂) အမှတ်(၆) ဇါန်၊ ဇူလိုင်၊ ၂ဝဝ၄
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊သင်တန်းဆရာများလေ့လာရန်အတွက်သာ မြန်မာနိုင်ငံ ရှေ့နေများကောင်စီ
လူတိုင်းအတွက် အခြေခံဥပဒေ မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီ ၂အုပ်
ချိုးလင်းပြာ၊ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၇၊ ၂ဝဝ၁ နိုဝင်ဘာ
မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေပိုင်းအတွင်း နိုင်ငံအတွင်းအခြေမဲ့မှုများနှင့် အကာအကွယ်ပေးမှုများ ဤBBဃ
အဝလွန်ခြင်းဖြေရှင်းနည်းကား အဘယ်နည်း နိုင်းလော့
တိမ်းစောင်းမခံနိုင်သောမျှခြေ တိုးတက်သော မွန်လူငယ်အစည်းအရုံး၏ အစီရင်ခံစာ
င်္သမကာဂျာနယ် အတွဲ ၁ ၊ အမှတ် ၃၊ မတ် ၂ဝဝ၇
ကာမန္တကီနီတိသာရကျမ်း ရခိုင်စစ်ပညာကျမ်း ရခိုင်ဘုရင်မင်းဖလောင်းလက်ထက်ရေးသည်။
ကလေးများအားစစ်သားအဖြစ်အသုံးပြုရေးရပ်တန့်ရေး လူ့အခွင့်အရေးပညာပေးဌာန မြန်မာနိုင်ငံ
အခြေခံအလုပ်သမားအခွင့်အရေနှင့် ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမားဆိုင်ရာ ဗဟုသုတ လူ့အခွင့်အရေးပညာပေးဌာန မြန်မာနိုင်ငံ
ထိုင်းနိုင်ငံရှိရွေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတို့၏ အခွင့်အရေးများကိုယေဘုယျဖော်ပြခြင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီ
ို့ကလေးအခွင့်ရေးစာအုပ် လူ့အခွင့်အရေးပညာပေးဌာန မြန်မာနိုင်ငံ
နေ့စဉ်တွက်တာမှတ်စရာ လူတိုင်းအတွက်ပညာရေး အမှတ် ၅၊ မေလ၊ ၂ဝဝ၇
ဦးဥတ္တမ ဂျာနယ် အမှတ်စဉ် ၄
ရခိုင်အောင်လံစာစောင် အမှတ် ၁ ဒီဖင်ဘာ ၂ဝဝ၄
ဦးဥတ္တမ ဂျာနယ် အမှတ် ၂ စက်တင်ဘာလ ၁၉၉၆
လူမှုအဖွဲ့အစည်းစီမံအုပ်ချုပ်မှု အောင်လက်မှတ်အဆင့် ၃ မြန်မာနိုင်ငံ ပထမအကြိမ် ၁၉၉၈
ပလောင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး ရွေကဖီးဂျာနယ် သြဂုတ် ၂ဝဝ၅
ို့ကလေးများအခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ စာအုပ်ုအေ့ပုနငမူန ဗူင ညေိ ဇက်ငဆမေ ဗူင
အောင်ဆန်းဂျာနယ် ဇန်နဝါရီလ ၂ဝဝ၆
နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးအတွက် အမျိုးသားညီလာခံကျင်းပရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှချမှတ်သော နိုင်ငံတော်မူများ
ီမိုကရေစီလေ့လာရေးဂျာနယ် အမှတ် ၁၊ ၂ဝဝ၇၊ ဖေဖော်ဝါရီ
မြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလဲမှုအတွက် အမျိုးသမီးများ၏ အသံများ သနပ်ခါးအဖွဲ့မှအသံများ
သောင်းပြောင်းထွေလာ ရယ်စရာမဂဇင်း အမှတ်၊ ၁၁၆၊ ဧပြီ ၂ဝဝ၅
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရ နှင့် ကရင်နီခေါင်းဆောင်များ၏ ဇက်ဒရယ်ရေးရာ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ ဆွေးနွေးမှုမှတ်တမ်းများ မူကြမ်း
တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးဘာသာရပ် ဦးသိန်းဦး မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီ
အနာဂတ် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရာတွင် အခြေခံရမည့် လမ်းညွန့်အခြေခံမူများ
ယိုးဒယားနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပေးအား တစေ့စောင်း လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း မြန်မာနိုင်ငံရှေများကောင်စီ ၂ဝဝ၅ ၊ မေလ ၁ဝ
အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေ မူကြမ်း င်္ဃီဃဃ
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဘာသာရပ် မြန်မာနိုင်ငံ ရှေနေများကောင်စီ
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီ
တရားမျှတသော တရားခွင်လွတ်လပ်သောတရားစီရင်ရေးနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြခံဥပဒေ မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီ ၂အုပ်
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၇၊ ၂ဝဝ၁ နိုဝင်ဘာ
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၅၊ ၂ဝဝ၁ သြဂုတ်လ
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၂၊ ၂ဝဝ၇ ဇွန်နဝါရီလ အမ
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၁၁၊ ၂ဝဝ၆၊ စက်တင်ဘာလ၊ အတွဲ ၃၆
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၃၊ ၉၉ မေလ၊ အတွဲ ၆
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၇၊ ၂ဝဝ၂ ၊ ဇန်နဝါရီလ အတွဲ ၁၉
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၅၊ ၂ဝဝဝ၊ စက်တင်ဘာလ အတွဲ ၁၃
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၇၊ ၂ဝဝ၅၊ စက်တင်ဘာ အတွဲ ၃၅
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၂၊ ၂ဝဝ၄၊ ဇါန်လ အတွဲ ၃ဝ
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၄၊ ၂ဝဝ၁၊ မေလ အတွဲ ၁၅
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၁၊ ၂ဝဝဝ၊ ဇန်နဝါရီလ အတွဲ ၁၄
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၇၊ ၂ဝဝ၁ နိုဝင်ဘာလ အတွဲ၁၈
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၁၊ ၂ဝဝ၄ ခုနှစ် ၊မတ်လ၊ အတွဲ ၂၉
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၁၊ ၂ဝဝ၁ ဇန်နဝါရီ ၊ အတွဲ ၁၄
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၇၊ ၂ဝဝ၂၊ ဇန်နဝါရီ
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၇၊ ၂ဝဝ၂၊ ဇန်နဝါရီ၊ အတွဲ ၁၉
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၈၊ ၂ဝဝ၅ ၊ ဒီဖင်ဘာလ အတွဲ ၃၆
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၃၄၊ ဇူလိုင်၊ ၂ဝဝ၅၊ အတွဲ ၃၄
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ်၃၊ ၂ဝဝ၄ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ အတွဲ ၃၁
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၃၊ ၂ဝဝ၇ ၊ မတ်လ ၊ အတွဲ ၄၂
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၄၊ ၂ဝဝ၅ ၊ ဇွန်နဝါရီ ၊ အတွဲ ၄
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၃၊ ၂ဝဝ၅၊ ဇွန်နဝါရီ၊ အတွဲ ၃၂
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၁၆၊ ၂ဝဝ၃ ၊ ဒီဖင်ဘာ ၊အတွဲ ၂၈
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ်၊ ၅၊ ၂ဝဝ၇၊ ဇူလိုင်လ၊ အတွဲ ၄၄
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၁ဝ၊ ၂ဝဝ၆၊ ဇါန်လ၊ အတွဲ ၃၈
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၂၊ ၂ဝဝ၄၊ ဇန်နဝါရီလ ၊အတွဲ ၃ဝ
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၆၊ ၂ဝဝ၅၊ ဇူလိုင်၊ အတွဲ ၃၄
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၇၊ ၂ဝဝ၂ ဇွန်နဝါရီ ၊ အတွဲ ၁၉
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၁၊ ၂ဝဝ၁၊ ဇန်နဝါရီ၊ အတွဲ ၁၄
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၂၊ ၂ဝဝ၇၊ ဇန်နဝါရီလ၊ အတွဲ ၄၁
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၁၆၊ ၂ဝဝ၃၊ ဒီဖင်ဘာလ၊ အတွဲ ၂၈
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၁၂၊ ၂ဝဝ၆၊ နိုဝင်ဘာ၊ အတွဲ ၄ဝ
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၇၊ ၂ဝဝ၂ ဇန်နဝါရီလ၊ အတွဲ ၁၉
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ်၊ ၁၁၊ နိုဝင်ဘာလ၊ အတွဲ ၂၃
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ်၊ ၇၊ ၂ဝဝ၁ ၊ နိုဝင်ဘာလ ၊ အတွဲ ၁၈
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ် ၆၊ ၂ဝဝ၅၊ ဇူလိုင်၊ အတွဲ ၃၄
ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင် အမှတ်၊ ၁၂၊ ၂ဝဝ၆ နိုဝင်ဘာလ၊ အတွဲ ၄ဝ
အကျိုးစီးပွားများ၏ ပဠိပက္ခ- မြန်မာ့ သစ်တောများ၏မသေချာသောအနာဂတ် အောင်တိုဘာ၊ ၂ဝဝ၃
အခြေခံဥပဒေရေးရာစာစောင် အမှတ် ၁၊ ၁၉၉၄၊ စက်တင်ဘာ၊
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ ၁၉၄၇
ရခိုင်သဟာယအသင်း၊ ကိုယ့်ကျိုးမပါ၊ အများအကျိုးရှာ အမှတ် ၄
အခြေခံဥပဒေရေးရာစာစောင် အမှတ် ၁၉၊ သြဂုတ် ၂ဝဝ၄
အလင်းအိမ်စာစောင် ၁၈ နျစ်မြောက် ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံ အထ်ိမ်းအမှတ် အထူးထုတ် ၂၇၊ သြဂုတ်၊ ၂ဝဝ၆
အလင်းအိမ်စာစောင်၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း ၇ ရက်၊ ၂၇၊ အောင်တိုဘာ ၂ဝဝ၆ အတွဲ ၁ အမှတ် ၇
ရဟန်းပျို ဂျာနယ် အတွဲ ၅၊ အမှတ် ၂ဝဝ၆၊ စက်တင်ဘာ ၄ အုပ်
ီပဲယင်းလုပ်ကြံမှု အရေးယူဆောင်ရွက်ရေးကော်မရှင်၊ ဒုတိယအကြိမ် ပဏာမ အစီရင်ခံစာ
ဥတ္တမ ဂျာနယ်၊ ၂ဝဝ၆၊ စက်တင်ဘာလ ၉ ရက် ၆၇ ကြိမ်မြောက် ဦးဥတ္တမနေ့အထိမ်းအမှတ်
သစ္စာတော်လှန်ရေး စာမေမဂဇင်း အမှတ် ၁၁၊ နိုဝင်ဘာ ၂ဝဝ၆
ိမိုကရေစီဂျာနယ်၊ ၂ဝဝ၆၊ အောင်တိုဘာ၊ အမှတ်၊ ၁
နိုင်ငံတခုသို့ တမ်းချင်း၊ ဝတ္တုတိုစု ၊ မြကြေးမုံ
သတင်းသမား သတိထားစရာ မြန်မာစာနှင့် စကားသံများ
ရေကာတာများ မြစ်ချောင်းများနျင့် အခွင့်အရေး
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရ ဖက်ဒရယ်ရေးရာကော်မတီနှင့် ကရင်နီခေါင်းဆောင်များ၏ ဇက်ဒရယ်ရေးရာ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ ဆွေးနွေးမှုမှတ်တမ်းများ မူကြမ်း
လူ့အခွင့်အရေးမိတ်ဆက်နှင့် နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးဥပဒေများဘာသာရပ်
အကြမ်းဖက် ပဌိပက္ခများ ပြီးဆုံးပြီးနောက် ပြည်လည်ရင်ကြားစေရေး ပေါ်လစီအနှစ်ချုပ်
လွတ်လပ်သောတရားစီရင်ရေး ၊ မျှတသောတရားခွင့်နှင့် ပြစ်မှုဆိုင်ရာအထွေထွေ ဗဟုသုတ
လူ့အခွင့်အရေးအတွေးအခေါ် အခြေခံများမှ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများကို ချဉ်းကပ်လေ့လာခြင်း
လူ့အခွင့်အရေးမိတ်ဆက် နျကင့် နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးဥပဒေများဘာသာရပ်
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန စစ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမှတ်စု
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆို်င်ရာ လူထုသဘောထားဆန္ဒဖော်ထုတ်ရေးကော်မတီ၏ ဥဘောထားရပ်တည်ချက်စာတမ်း
ရွှေရတု အမှတ် ဂ
ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး ၄၃နှစ်မြောက် ပလောင်းအမျိုးသားတော်လှန်ရေးအထိမ်းအမှတ် အထူးထုတ်ဂျာနယ်
ဒေါင်းအိုးဝေ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး အတွဲ ၁ အမှတ် (၇) ဇူလိုင်လ ၊ သက္ကရာဇ် ၂ဝဝ၁ ခု
၁ဝနှစ်မြောက် အိုကာဆို အထူးထုတ် မဂဇင်း
ရွေးကောက်ပွဲ စနစ်ဒီဖိုင်း မြန်မာဒီမိုကရေစီရံပုံငွေ မှဘာသာပြန်ဆိုသည်
၆၄ နျစ်မြောက် ဆရာတော် အရှင် ဦးဥတ္တမနေ့ အထိမ်းအမှတ် ကဗျာများ
ပြစ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရ၌်များတွင် နိုင်ငံအချင်းချင်းအကူအညီပေးရေး ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများ
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ လူထုသဘောထားဆန္ဒ ဖော်ထုတ်ရေး ကော်မတီ၏ ဥဘောထား ရပ်တည်ချက် စာတမ်း
၈၈ ရဲ့ အသံများ
ဆဲဗင်းဇူလိုင် သို့မဟတု ကျောင်းသားသမဂ၏ အစဉ်အလာကို ဖောက်ဖျက်ခြင်း
သံတိုင်းကြား ကြွေသွားတဲ့ ကြယ်စင်တွေ
ရွှေကဖီးဂျာနယ် ဇါန် ၂ဝဝ၄ အတွဲ ၃၊ အမှတ် ၁
ဗမာပြည်လုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားနှင့် လူငယ်များအစည်းအရုံး မဂဇင်း
တိုးတက်သော မွန်လူငယ်များဂျာနယ် အတွဲ၊ ၄ ၂ဝဝ၃
ဟိုက်စကူးနှင့် အ ထ က (၁) စစ်တွေ ငွေရတု မဂဇင်း
အေးမိဖြူ တို့ခေတ်ကျမှ ညံ့ကြတော့မှာလား
ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ် ၁၉၉၈ ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်
Posted by Arakan National Library at 2:27 AM ,0comments